Xuquuqda Dadka Guryaha Kireysta Ee Minnesota | LawHelp Minnesota
Xuquuqda Dadka Guryaha Kireysta Ee Minnesota
Buug-yarehan wuxuu dadka guryaha kireysta ka caawinayaa inay fahmaan xuquuqdooda sharciga ah. Qoraalkan waa mid ku hagaya ee ma aha mid ka jawaabaya su'aal kasta. Sharciyada looga hadlayo buugyarehan badanaa waa kuwa la beddelo. Marka iska hubso in aad la socoto isbeddel kasta. Buug-yarehaan waxaa ku qorana waa xeerarka guud. Waa xeerar xaaladdaada khuseyn kara ama aan khuseyn karin.
Dhismeyaal dabaqyo ah oo guryo badan ayey ugu badan yihiin guryaha la kireysto. Guri keligiis ah, guri la jiito, guri laba dabaqyo ah, kuwa isku dheggan ayaa ka mid ah guryaha la kireysto. Buug-yarehan oo dhan ereyga la isticmaalayo waa "guri" ayadoo loola jeedo nooc kasta oo ka mid guryaha la kireysto oo dhan.
Cutubka 1. Ka-hor Intaan Guri la Kireysan
Adigu Soo Ogow Qiimaha Kirada
Soo Hubso In Uusan Xaraash Aheyn Guriga Aad Rabto
Curaarta Hashiiska Ka Hor
Maxaa Dhacaya Haddii Warbixinta Kireystaha Awgeed La I Soo Diido?
Warbixinta Kiisaska Maxkamadda Ee Ah Ka-Saaridda Guriga
Masixidda Ama Qarinta Diiwaanka Maxkamadda Ee Ka-Saaridda Guriga
Cutubka 2. Kireysashada Guri
Heshiiska Kirada Wakhtiga Go'an
Heshiiska Kirada Xilliga Ah
Gelidda Heshiiska Kirada
Shuruudaha Heshiiska Kirada
Ha Saxiixin Heshiis Ay Ku Jiraan Wax Sharci-Darro Ah
Wadaagidda Guryo Qolqol Ah
Cutubka 3. Xuquuqda Iyo Waajibaadka Kireystaha
Xuquuqda Shakhsi Ahaaneed
Cutubka 4. Dhibaatooyinka Dayactirka Iyo Sameynta Yo Xadgudubka Kireeyaha Ee Heshiiska
Kirada Maxkamadda La Geeyo
Bilaabidda Kiis Kirada Lagu Bixiyo Maxkamadda
Ogeysiis Ku Socda Kireeyaha
Cutubka 5. Sharciga Xalraadinta Kireystaha Minnesota
Sharciga Xalraadinta Kireystaha Minnesota
Sharciga Xalraadinta Degdegga Ah Ee Kireystaha
Lacagta Kirada In La Hayo
Dayactirka Iyo Goosashada
Dacwada Kiro Xaqdarro Ah
Cutubka 6. Sunta Ledhka
Dhibaatooyin Caafimaad Oo Culus
Dacwo Sharci Ah
Cutubka 7. Beddelaadda Ama Joojinta Heshiiska Kirada
Beddelaadda Ama Joojinta Heshiiska Kirada
Waxaan rabaa inaan guuro oo aan dhib iga soo gaarin. Ma jebin karaa heshiiska?
Jebinta Heshiiska Shuruudaha Go'an
Jebinta Heshiiska Xilliga Ah
Kala-Bixid Fudud Labada Dhinac
Aqbalaadda Lacagaha Kirada
Guriga Oo La Iibinayo, Beddelka Dhismaha Guryaha, iyo Guryaha Xaraashka Ah
Cutubka 8. Guri-Ka-Saarid — Khasab Marka Lagu Saarayo Kireystaha
Guriyo Aan Lagu Noolaan Karin
Habka Keliya Ee Sharciga Ah Ee Guri La Isaga Saarayo — Kiisaska Maxkamadeed Ee Guriga La Isaga Saaro
Dacwad-Dhageysiga Ka-Saaridda Guriga
Difaacyo Guud Oo Ah Dacwado Maxkamadeed Oo Guri La Isaga Saaro
Amarka Ka-Saaridda Guriga
Meelaha La Dhigto Alaabta
Marka Kireeyuhu Qaato Alaabta Aad Qaadan Weydo
Cutubka 9. Ka-Guuridda
Xaaladaha Qofka Kula Nool
Alaabada Iyo Hantida Shakhsiga Ah
Cutubka 10. Guryaha Dowladdu Leedahay Iyo Kuwa Ay Kabto
Guryaha Dowladdu Leedahay Iyo Kuwa Ay Kabto
Haddii Laguu Diido Degidda Guryaha Dowladda
Habka Cabashada - Haddii Aad Wax Ka Cabaneyso
Guryaha Dhismahoodu Warshad Soo Diyaariso
Magaalada Mataanaha Xafiisyadooda Baarista Kireystaha
Heshiiska Kirada Caadiga Ah Ee Minnesota
Tenants' Rights in Minnesota (PDF) 1.71 MB
Disclosure of Information on Lead-Based Paint and/or Lead-Based Paint Hazards (PDF)489.31 KB
Answer Form to Landlord's Eviction Petition (PDF)510.44 KB
Markaad guri raadsaneyso, waa in aad soo aragto meesha aad rabto inaad ku noolaato. Ha ka yeelin kireeyaha inuu ku tuso gurigaad rabto "mid la mid ah." Si taxaddar leh u samee kormeerid fiican. Iska fiiri wixii cillado iyo dhib kale ah. Iska hubso tuubbooyinka, nalalka, qalabka, kuleyliyaha, santuuqa korantada, fure kasta, iyo daaqadaha. Fur biyaha qasabadaha, suulliga, fur daaqadaha, oo shid nal kasta. Waxaa kuu fiican in aad qorato wax kasta, gaar ahaan haddii aad u malayneyso in aad baahan doontid. Liiska dayactirka ka fiirso buugyarehan qeybiisa dambe oo ku qoro wixii aad aragto. La hadal dadka kale ee kireystay guryaha ama dhismaha ee hadda ku dhex nool. Weydii in ay wax cabasho ah ka qabaan dhismaha ama maamulka.
Hubso Sharciyada ay Jebiyeen
Haddii aad rabto guri dabaq ah, soo baaro wixii ka qoran cinwaankaas oo ah sharci-jebinta gobolka ama xeerarka guryaha. Waxaad taleefan kula xiriiri kartaa maamulka magaalada, waaxda caafimaadka ama waxaad ka baaran kartaa intarnetka. Iska firii haddii ay jiraan wax ay tahay in aad guriga ka sii ogaato. Haddii aad u maleyneyso in ay dhibaato ka imaan karto guriga markaad kormeerto, runtii waxaa muhiim ah in aad ficil sameeyo. Xafiisyo ayaa kuu sheegi kara haddii ay guriga wax dhib ka jiraan, markii ugu dambeysay ee la kormeeray, iyo wixii xal ah oo laga qabtay dhibaatooyinkaas.
Waxaa laga yaabaa in ay dhibaatooyin ka jiraan guriga xitaa haddii aan lagu sameyn wax kormeerid ah. Qaar badan oo ka mid ah magaalooyinka yaryar iyo meelaha miyiga ah ma laha wax ah kormeerid ama diiwaan qoran.
Milkiileyaasha guryaha waa in ay ku ogeysiiyaan go'aan kasta iyo amarro kormeerid ah haddii lagu ganaaxay. Amar wixii laga soo saaray waxaa loola jeedaa in milkiilaha guriga lagu amray in uu hagaajiyo dhibaatooyin, laakiin wakhtigii loo qabtay kama dhamaan ama shaqadii lama qaban. Milkiiluhu waa in uu ku ogeysiiyo wixii amar ka dhan ah ka hor inta aadan saxiixin heshiiska kirada ama aad bixin kiro ama deebaaji. Kireeyuhu waa in uu kireyste kasta siiyaa koobbi cusub oo ah amarradii loo soo diray
1. In lagu ganaaxay dhibaato halis ku ah caafimaadka ama badqabidda dadka guriga kiraystay. Waxaa ka mid ah dhibaatooyin ka jira guryaha iyo goobaha caamka ah ee dhismaha.
2. Amar ah dhaliil markaas taagan oo sheegeysa in dhismaha ama guri ka mid ah "uusan u qalmin in ay dad ku noolaadaan."
Kireeyaha sidoo kale waa in uu meel ku soo dhejiyo ogeysiis ay ku qoran yihiin gebi ahaan amarrada kale ee ah kormeeridda guriga ee aan khatar ku ahayn caafimaadka iyo badqabidda dadka guryaha kireystay, laakiin lagu mar hore lagu ganaaxay. Ogeysiiskaas waa in lagu dhajiyo meel si fudud loogu arki karo.
Haddii aad go'aansato in aad kireysato guriga ka dib markaad kormeerid ku sameyso, waa in aad liis qoraal ka sameysato dhib kasta. Haddii aad sameysato liiska markaad kormeeridda sameyso, milkiilaha waa in uu saxiixo. Haddii aadan markaas liis sameysan, haddaba sameyso oo milkiiluhu ha kuu saxiixo. Koobbi ka sameyso oo meel dhigo. Liiskaas mar kale ayuu kugu caawin doonaa haddii aad u baahan tahay in aad dayactir ama waxa uu noqonayaa caddeyn in wixii dhib ah oo kaa horreeyey aadan adigu masuul ka ahayn. Liis tusaale ah ka eego qeybta ugu dambeysa buugyarehan.
Ka hor intaadan guri kireysan, adigu soo ogow qiimaha kirada guriga. Kirada ka sokow, waxaa laga yaabaa inaad bixiso kharashka kuleyliyaha, biyaha, nalalka, ama kharashaad kale. Waxa kale oo aad soo ogaan kartaa kharashaadka adiga weydiinaya dadka kale ee guryaha kireysta. Waxaa laga yaabaa in lacag lagaaga qaado qashinka ama adeegyo kale.
Haddii aqalku leeyahay qalab ah cabbire (gaas, biyo, koronto, iwm.), qalabkaas haddii loo isticmaalo wax ka badan hal guri waxa uu noqonayaa qalab la wadaago. Markaas biilka adeegyadaas waa in lagu soo qoro magaca milkiilaha. Waxa keliya oo ka baxsan waa biilka korontada. Waxa ay ku xiran tahay shirkada korontada, laakiin biilku waxaa lagu soo qoraa karaa magaca kireystaha haddii isticmaalka ka baxsan guriga kirada ah uu yar yahay (tusaale ahaan, hal nal oo ifiya luuqa guryaha).
Kharashaadka la wadaago kireystuhu waxa uu u qaybin karaa kireysteyaasha wadaaga qalabka cabbira. Habka uu kireeyuhu u kala qeybiyo biilka iyo inta jeer ee lagugu soo dallacayo waa in ay ku qoran tahay heshiiska guriga. Milkiiluhu waa in uu ku siiyo koobbiyada biilasha ee dhismaha labadii sano ee la soo dhaafay.
Haddii uu milkiile cusub la wareegay dhismaha wax ka yar 2 sano ka hor, waxaad ka heli karto oo keliya waa biilasha korantada laga bilaabo wakhtiga uu milkiilaha cusub la wareegay.
Ka hor intaadan saxiixin heshiiska kireystaha, milkiiluhu waa in uu kuu sheego haddii laxaraashayo guriga. Haddii uu milkiiluhu kuu sheegi waayo guriga oo xaraash ku jira, waxaad la aadi kartaa maxkamad adiga oo ka codsanaya $500 oo ah ganaax madani ah. Haddii guriga xaraash ahaan lagula wareegayo, waxaad xaq u leedahay inaad gurigaas ku sii noolaato xataa haddii heshiiska kirada uu kaa dhaco marka guriga lala wareegayo. Waxaa jira hal mar oo aadan sidaas sameyn karin: haddii milkiilaha cusub uu halkaas ku noolaan doono. Markaas, waxaa waajib noqoneysa in lagu siiyo ogeysiis ah 90 maalmood ah oo aad kaga guurto. Hubso in aad haysato macluumaad kasta oo aad u baahan tahay ka hor intaadan saxiixin heshiiska kirada.
Waxaa laga yaabaa in aad codsiga guriga ku bixiso lacag (ama lacagta baarista). Lacagtaas waxaa lagu bixiyaa kharashka lagugu soo baaranayo ee meelaha lala xiriirayo, sumcaddaada, iyo dambiyo aad horay u soo gashay. Milkiiluhu waa in uu soo baarto kireysteyaasha midba mar, oo hal mar ayuu lacagta baarista ka qaadi karaa qof kasta. Tusaale ahaan, kireeyuhu hal guri awgiis dadka ugama qaadi karo dhowr lacagood.
Weydii kireeyaha lacagtaas haddii aadan adigu guriga kireysan. Adigu ogow in lacagtaas lagu siin doonto iyo in kale. Lacagta aan la isu celin waa lacag aan kuu soo noqoneyn adiga. Laakiin lacagtaas waa in ay lcag "macquul ah" noqoto. Milkiiluhu waa in uu dib kuugu soo celiyo lacagtaada haddii aan loo adeegsan in lagugu soo baarto. Caddeyn ka qaado mar kasta oo aad codsiga guryaha lacag ku bixiso.
Ka hor intadaan bixin lacagta codsiga, mulkiiluhu waa inuu kuu sheegaa
1) waxyaabaha sabab u noqonaya in si toos ah laguugu diidayo guriga iyo
2) magaca, cinwaanka iyo lambarka taleefanka ee shirkadda baarista kireystaha ee la isticmaali doono si laguugu soo baarto taariikh ahaan.
Adiguna Hubso in aad gebi ahaan si daacad ah u buuxiso codsigaaga. Haddii aad been sheegto ama aad ka tagto macluumaad muhiim ah, milkiiluhu wuu kugu dacweyn karaa oo lacag ayuu kaaga heli karaa.
Milkiileyaasha qaarkood waxay kaa codsanayaan in aad lacag dhigto haddii aad rabto guri dhisme ka dhex yaalla. Lacagtaas ayaa la yiraahdaa "curaar lagaa sii haynayo" ama curaarta heshiiska ka hor. Waa wax ka duwan deebaajiga caadiga ah sababtoo ah waxaad bixineysaa wakhtiga aad codsaneyso guriga. Waxa ay ka horreysaa milkiiluhu intuusan kugu soo baaran taariikh hore iyo intaan la go'aansan in guriga lagaa kireeyo. Lacagtaas ma ahan lacagta baarista.
Kireeyuhu kaama qaadi karo lacag curaar ah ka hor inta uusan dhicin heshiiska qoran. Heshiisku wuxuu qeyb ka noqon karaa codsiga hore. Si taxaddar leh u akhriso wax kasta ka hor intaadan saxiixin. Heshiiska waxaa ku qoran sharciyo la xiriira lacagta in la soo celinayo ama aan la soo celineyn. Haddii uu milkiiluhu kaa kireyn waayo guriga, waxaa khasab ah in laguu soo celiyo curaartii heshiiska ka hor Haddiise milkiiluhu kaa kireeyo guriga, curaarta heshiiska ka hor ayaa laga dhigayaa mid laguugu xisaabiyo curaarta ama kirada guriga. Hase yeeshee, haddii kireeyuhu ku yiraahdo waad kireysan kartaa guriga balse aad adigu ka noqoto, kireeyaha waxaa loo oggol yahay in uu qaato lacagtii curaarta ahayd ee heshiiska kirada ka hor. Waxa ay ku xiran tahay waxa uu dhigayo qoraalka heshiiska. Akhriso heshiiska ka hor intaadan saxiixin.
Mar kasta iska weydii haddii lagaa rabo curaar. Haddii lagaa rabo, iska ogow inta ay noqon doonto iyo waxa lagu sameynayo. Markaad lacagtaas bixiso ka qaado caddeyn. Iska hubso in ay caddeyntu sheegeyso "curaarta guriga" ama "curaarta horumariska ah."
Waxaa muhiim ah in la barto kireeyaha iyo milkiilaha dhismaha. Sidoo kale waa in la ogaado sida loola xiriirayo kireeyaha guriga ama milkiilaha.
Magaca iyo cinwaanka milkiilaha dhismaha waa in lagu dhejiyo meel caamka ah ee dhismaha dabaqa ah. Weydiiso in lagu tuso.
Kireeyeyaashu ma diidi karaan in ay qof ka kireeyaan guri iyadoo sababtu tahay
xaaladda xaas ahaaneed
da'da (magaalada St. Paul oo keliya)
in la haysto carruur (marka laga reebo marmar)
in la qaato kaalmo dowladeed ama kabista kirada.
Waxaa sharci darro ah in uu takoorid awgeed kireeye guri kuu diido, in la iska jaro adeegyo, in kiro la isku kordhiyo, ama in guri la iska saaro sababahaas awgood.
Haddii aad tahay naafo dhib ku qabi kara guriga, waxa aad xaq u yeelan kartaa "qaabbilaad macquul ah" Qaabbilaadda macquulka ah waa is beddello kuu suurta gelinaya in aad gali karto, ku noolaan karto ama isticmaali karto guriga. Qaabilaadda macquulka ah waxa ay noqon kartaa sida
Inaad codsato wakhti si aan guriga lagaaga saarin oo aad hesho adeegyo kugu caawiya in aad raacdo sharciyada heshiiska kirada. Tusaale ahaan, hawlaha nadaafadda guriga, adeege bulsho oo xalliya muranka kireeyaha ama kireysteyaasha kale, ama adeegyada caafimaadka si loo qoro daawo kaa caawin karta in aad si fiican u raacdo xeerarka heshiiska.
In aad codsato rukhsad si aad u haysato eey indho iyo hagid kuu ah ama xayawaan kale oo aad ugu baahan tahay naafannimada awgeed. Waxay u badan tahay inaad u baahaneyso waraaqo ama caddeyn kale oo ka timaadda dhakhtar ama xirfadle kale oo aqoon u leh naafannimadaada. Arrintaas waa mid la oggolaan karo xataa haddii uu jiro sharci "mamnuucaya xayawaanka."
Meel gaar ah oo la dhigto wax gaadiid kuu ah oo ku dhow albaabka guriga haddii uu socodku dhib kugu yahay adiga. Waxaad codsan kartaa meel kuu gaar ah xataa haddii barxadda baabuurta aan la kala lahayn, oo ay jiraan meelo kale oo badan oo "boosaska naafada" lagu calaamadiyey.
Haddii aad caddeyso in adiga lagu takooray, waxaad ku heli kartaa lacag, guri ama gargaar kale.
Haddii aad dareento in uu kireeyuhu ku takooray, la xiriir qareen. Halkam waxaa kuugu qoran xafiisyo laga yaabo in ay ku caawin karaan
Housing Discrimination Law Project of Legal Aid (Sharciga Takoorka Guriyeynta ee Mashruuca Kaalmada Sharciga): 612-334-5970
Housing Equality Law Project of Southern Minnesota Regional Legal Services (Sharciga Sinnaanta Guriyeynta ee Mashruuca Adeegyada Sharciga ee Koonfurta Gobolka Minnesota): 651-222-4731
US Department of Housing and Urban Development (HUD) Housing Discrimination Hotline (Waaxda Mareykanka ee Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka (HUD) Khadka Tooska ah ee Takooridda Guriyeynta): 800-669-9777, TTY: 800-927-9275
Minnesota Department of Human Rights (Waaxda Xuquuqda Aadanaha ee Minnesota): 800-657-3704, TTY: 612-296-1283
Kireeyeyaasha guryaha badanaa waxay isticmaalaan shirkadaha baarista kireystaha si ay wax uga ogaadaan kireystaha inta aan guriga laga kireyn. Shirkadaha baaritaanka waxay soo sheegaan macluumaadka sida taariikhda kirada, dadka sharci ahaan loo diidi karo (guri laga soo saaray), taariikhda sumcaddooda, iyo dambiyada lagu soo helay. Shuruucda gobolka iyo federaalka ayaa xukuma shirkadahaas. Waxaad xaq u leedahay inaad dacwad ka gudbiso shirkadda baaritaanka kireystaha haddii aysan raacin sharciga. La xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee degmadaada haddii aad dhibaato kala kulantid shirkad baarta kireysteyaasha.
Warbixinta Baarista Kireystaha
Waxaad xaq u leedahay koobbi inaad ka hesho warbixintaada baarista kireystaha. Shirkadda baarista kireysteyaasha waa in ay ku siiso koobbiga warbixinta baarista kireystaha markaad ka codsato. Shirkadda baarista kireysteha ayaa laga yaabaa in ay kaa rabaan in aad bixiso lacagta koobbiga warbixintaada, laakiin kuguma dallici karaan wax ka badan $9. Haddii guri laguugu diiday 30-kii maalmood ee la soo dhaafay macluumaadka ku jiray warbixintaada awgeed, koobbiga warbixintaada waxay noqoneysaa lacag la’aan.
Waxaa kuu fiican inaad aragto macluumaadka qoran ee ay shirkadda baarista kireystaha adiga kaa hayso. Haddii macluumaadka baarista kiraystaha uu xun yahay, waxay adkaan kartaa inaad hesho kireeye guri kaa kireeya.
Warbixinta baarista kireystaha waa in ay ahaato mid sax ah. Mararka qaarkood waxay kiraystaha ka hayaan macluumaad khaldan. Dhowr sababood awgood ayey sidaas u dhici kartaa. Sababta ugu badan ayaa ah in uu kirayste magac la wadaago dad badan (tusaale ahaan, George Jones). Markaas oo kale, macluumaad ku saabsan dad ay magacyadoodu isku mid yihiin ayaa laga yaabaa in ay soo dhex galaan warbixintaada baarista kireystaha. Warbixintu sidoo kale waxa ay u khaldami kartaa waa iyada oo macluumaadka laga soo helo meelo aan lagu kalsoonaan karin. Warbixinta baarista kiraystaha waa in lagu qoraa taariikhda dhalashada iyo magaca kireystaha oo buuxa haddii la heli karo. Sidaas ayaa yareyn karta tirada khaladaadka dhici kara.
Waxaad xaq u leedahay in aad ka doodid wixii macluumaad ah ee ku jira warbixintaada baarista. Haddii aad u maleyneyso in warbixintaada baarista ay ku jiraan waxyaabo khaldan, shirkadda baarista kireystaha waa in ay soo baaraan waxa aad ka diiddo. Haddii baaristoodu muujiso in uu macluumaadku khaldan yahay, ama haddii macluumaadka aan dib loo soo xaqiijin karin, shirkadda baarista kireystaha waa in ay soo saxdo ama masaxdo. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad sharxi karto waxyaabaha ku jira warbixinta iyo sababta aad ku diideyso.
Haddii mulkiiluhu kaa qaado lacagta codsiga, waa in lagu siiyo magaca, cinwaanka iyo lambarka taleefanka shirkadda baaritaanka kiraystaha ee ay adeegsadaan. Haddii laguu diido warbixintaada baarista kireystaha awgeed waa inaad hubisaa waxyaabaha ku qoran.
U tag ama waraaq u qor shirkadda baarista kireystaha oo weydiiso koobbiga qoraalkooda warbixinta. Xusuusnow, haddii aad weydiiso 30 maalmood gudahood markii laguu soo diiday guriga, koobbigu waa lacag la'aan. Haddii kale, waa in aad iska bixiso lacagta koobbiga warbixinta.
Waa in aad haysato aqoonsi markaad codsaneyso koobbiga warbixintaada baarista kireystaha. Haddii aad codsigaaga ku soo direyso boostada, codsiga soo raaci koobbiga kaarkaaga aqoonsiga ama laysanka baabuurka.
Shirkadda baarista kireystaha waa in ay si dhakhso leh wax uga qabataa markaad weydiisato koobbiga warbixintaada. Taas macnaheedu waa haddii aad si shakhsi ah ugu timaaddo xafiiska inta lagu jiro saacadaha shaqada caadiga ah, shirkadda baarista kireystaha waa in ay ku siiso koobbiga warbixinta isla wakhtigaas.
Haddii aad codsigaaga soo dirto oo aad soo weydiisato in laguu soo diro, shirkadda baarista kireystaha waa in ay kuugu soo dirto koobbiga warbixintaada 5 maalmood oo ah kuwa shaqada gudahood.
Waxaad sidoo kale soo codsan kartaa "ku-sheegidda taleefanka." Taas macnaheedu waxa weeye in warbixintaada taleefanka laguugu akhriyo. Si aad u codsato ku-sheegidda taleefanka, soo dir codsi qoraal ah, oo aad soo raaciso koobbiga aqoonsigaaga. Codsigaagu waa in aad ku sheegto maalinta aad taleefan soo direyso, iyo in aad rabto warbixinta in laguu akhriyo isla maalintaas. Haddii aad codsatay ku-sheegidda taleefanka, shirkadda baarista kireystaha waa in ay taleefanka kuugu akhriyaan warbixinta maalinta aad ku sheegatay codsiga qoran. Xusuusnow, ku-sheegidda taleefanku kuuma ilaalinayso xuquuqda ah in aad hesho koobbi
Si taxaddar leh u akhriso warbixinta baarista kireystaha. Ka dhex raadi macluumaad khalad noqon kara. Warbixintu waa in ay muujiso dhammaan macluumaadka ay shirkaddu kaa hayso ee ugu jira feylalka, iyo waliba halka ay macluumaadka ka soo heleen
Haddii ay warbixintu tahay macluumaad khaldan, ka codso shirkadda baarista kireystaha in ay soo baaraan. Waxaa fiican in aad uga codsato si qoraal ah. Koobbi ah warqaddaas adigu naftaada u hayso.
Shirkadda baarista kireystaha waa in ay baaraan wixii macluumaad ah ee aad aragto in ay khaldan yihiin. Baaristaas ayaa laga yaabaa in lagu soo ogaado in uu macluumaadku khaldan yahay ama in aan la xaqiijin karin. Hadday sidaas dhacdo, shirkadda baarista kireystaha waa in ay ka masaxdo macluumaadkaas warbixintaada.
Ka codso shirkadda baarista kireystaha in ay ogeysiis u dirto qof kasta oo helay koobbiga warbixintaada 6-dii bilood ee la soo dhaafay. Ogeysiiska waa inuu u sheego in uu macluumaadku khaldan yahay oo laga saaray warbixintaada. Shirkadda baarista kiraystaha ma soo diri karto ogeysiiskaas ilaa aad adigu ka codsato mooyee. Waa muhiim in aad sidaas sameyso.
Waxaad xaq u leedahay inaad u sheegto "sheekada dhinacaaga" dhammaan macluumaadka ku taxan warbixintaada oo aan laga saari karin warbixinta. Waa kuu fiican in aad sidaas sameyso si aad u sharxi karto sababta ay macluumaadka kirada ah ee xun ugu jiraan warbixintaada qoran oo ah warbixintaada oo bilaash ah. Waa in aad hesho koobbi qoran oo ah warbixintaada.
Qoraalka aad wax ku sharxayso waa in uu noqdo 100 eray ama wax ka yar. Shirkadda baarista kireystaha waa in ay sharxiddaada qoraalka ah ku daraan warbixintaada baarista kireystaha. Sidoo kale waa in ay soo diraan sharxid qoran oo ay la socdaan dhammaan koobbiyada warbixinta baaristaada kireystaha ee mustaqbalka.
Kireeyaha guriga ayaa isku dayey in uu sannadkii hore kaa saaro guriga adigoo bixin waayey kiradaada. Waxaad joojisay bixinta kirada sababtoo ah kireystuhu ma uusan sameyn dayactir ay ku amreen maamulka magaalada in uu sameeyo. Dacwad-dhageysiga, adigaa ka guuleysatay oo waad ku sii jiri kartaa guriga. Laakiin xaqiiqa ahaan maaddaama uu isku dayay inuu guriga kaa saaro, waxaa dhici karta in ay warbixintaas kaa hari weydo. Haddii aad sharxid faahfaahsan ka sameyso warbixintaada baarista kireystaha, milkiileyaasha guryaha ee mustaqbalka ayaa ogaan doona in aadan ahayn kireyste xun.
Haddii ay dacwad-dhageysiga ka-saaridda guriga horay u dhacay, shirkadda baarista kireystaha waa in ay warbixinta ku soo daraan dacwadaas. Maxkamaddu waxay gudbineysaa go'aannada kiisaska ka-saaridda (oo waa wax loo yaqaan qabsasho aan sharci ahayn) iyadoo adeegsanayo sharciyo. Sharciyadaas waxa ay sheegayaan haddii kireystaha guriga looga saaray kirada oo uu bixin waayey, ama jebinta heshiiska kirada, ama arrimo kale. Waxay kale oo ay sheegayaan haddii kireystuhu ku guuleystay kiiska iyadoo sababtuna tahay dayactir la sameyn waayey ama haddii ay jirtay wax is-afgarad ah oo u dhexeeyey kireeyaha iyo kireystaha.
Dacwadaha maxkamadda ee ah ka-saaridda guriga ee lagugu soo eedeeyo, shirkadda baarista kireystaha waa in ay warbixintooda ku qorto natiijada kiiska. Laakiin taasi waa marka haddii natiijada kiiska la heli karo oo keliya marka la soo codsado warbixinta baarista kireystaha. Sababtaas awgeed, warbixinta qaar ayaan ku dhex qorneyn macluumaadka. Haddii ay sidaas dhacdo, u sheeg milkiilaha guriga iyo shirkadda baarista kireystaha wixii ka dhacay dacwad-dhageysiga maxkamadda, qofkii guuleysatay iyo sababta. U dir sharraxaad qoraal ah shirkada baarista kireystaha oo ka codso in lagu daro warbixintaada.
“Masixidda” macnaheedu waa qarinta diiwaan la heli karo oo ah dacwada maxkamadeed. Haddii lagaa masaxo diiwaan ah ka-saaridda guriga, markaas qofkii baaranaya feylasha maxkamadda ma heli karo diiwaanka kiiskaaga ee ah ka-saaridda guriga. Sharcigu ayaa oggol maxkamadaha in ay masaxaan dacwadaha ka-saaridda guryaha, laakiin waa marka ay jiraan xaalado aan badneyn. Haddii ay dacwad ah guri-ka-saarid kaa hor taagan tahay in aad guri hesho, wa in aad isku deydo in diiwaankaaga laga saaro. Laakiin waxaad fursad u haysataa oo keliya waa haddii aad ku guuleysato dacwad ah ka-saaridda guriga ama aad caddeyn karto in milkiiluhu kiiskaaga uu kugu soo oogay dacwad aan run ahayn.
Waxaa jira wakhtiyo cayiman oo keliya oo lagaa oggolaan karo in dacwaddaas lagaa masaxo. Si aad isaga masaxdo danbigaas, kireeyaha kiiska waa in uu noqdaa “mid aan haysan dacwad ku filan oo aan lahayn sabab run ku ah sharciga,” oo masaxiddu waa in ay tahay “mid iska cad sharci ahaan,” oo “sharci ahaan” waa inay sax ku tahay “danta dadweynaha oo ah in ay heli karaan diiwaanka qof kasta.”
Si kale haddii loo dhigo, kireeyuhu wuxuu keenay dacwad ah guri-ka-saarid oo aan sax ahayn oo waxay noqoneysaa caddaalad darro in laga oggolaado oo ay ku sii jirto diiwaanka dadweynaha.
Dacwaduhu waa ay kala duwan yihiin, oo sababtaas awgeed qaarkood ayaa la masixi karaa. Ha soo codsan in dacwad lagaa masaxo haddii aadan
ku guuleysan dacwad
aqbalin heshiis ah kiis kugu furnaa, oo uusan kireeyuhuna aqbalin in uusan haysan kiis sax ah
in lagaa guuleystay kiis sababtoo ah ma aadan helin waraaqo maxkamadeed, oo adiguna haysato caddeyn ah in uusan kireeyuhu haysan kiis sax ah oo adiga kaa dhan ah ama
kireeyaha oo ah milkiile laga xaraashayo hanti dhuleed oo aad adiguna ka guurtay ka hor taariikhdaadii ama inaadan weligaaba helin wax ogeysiis ah oo aad uga guureyso xaraashka awgiis.
Waa in aad maxkamadda si qoraal ah uga soo codsato masixidda diiwaankaaga. Waxaa laga yaabaa in aad maxkamadda u sharraxdo sababta aad ugu maleyneyso in aad xaq u leedahay in wax lagaa masaxo. Codsigaas qoraalka ah waxaa loo yaqaan "mooshin" Maxkamadaha badankood waxay leeyihiin foomam ah “mooshin” oo aad isticmaali karto. Lacag ayaa la isaga qaadaa codsiga ah mooshin dambi lagu masayo. Waxaad ka soo codsan kartaa xoghaynta maxkamada sida aad mooshinka ugu hesho bilaash. La xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga si laguugu caawiyo masixidda diiwaankaaga. Liiska xafiisyada adeegyada sharciga ka eego qeybta ugu dambeysa ee buugyarehan.
Haddii ay maxkamaddu kuu masaxdo diiwaankaaga, la xiriir xafiis kasta oo ka mid ah kuwa baarista kireystaha oo ka furan Minnesota si aad ugu sheegto. Sharciga ayaa sheegaya in shirkadaha baarista aysan soo sheegi karin guri-ka-saarid marka ay ogyihiin wax laga masaxay. Liiska shirkadaha baarista kireystaha Magaalooyinka Mataanaha ah waxaad ka eegan kartaa qeybta ugu dambeysa ee buugyarehan. Waxa kale oo laga yaabaa in aad ka helho liistada shirkadaha baarista kireystaha xafiisyada maxkamada.
“Heshiisku” waa oggolaansho uu kireyste la galo kireeye si uu u kiraysto guri uu ku noolaado. Heshiisku badanaa waa qoraal, laakiin waxa uu noqon karaa mid afka laga sheego. Heshiisku waa in uu ahaado qoraal haddii ay muddada kirada ka badan tahay 1 sano. Qaar ka mid ah kireeyeyaasha dhismayaasha yaryar waxay jecel yihiin in ay heshiis afka ah la galaan kireysteyaasha. Waa arrin sharci ah laakiin dantaadu waxay ku jirtaa inaad gasho heshiis qoraal ah. Haddii guriga aad rabto uu ku dhex yaallo dhisme ka kooban 12 qaybood ama wax ka badan, milkiilaha guriga waa khasab in uu isticmaalo heshiis qoraal ah
Markaad heysato heshiis qoraal ah, milkiilaha guriga waa in uu ku siiyo koobbiga heshiiska. Haddii kireeyuhu kuu diido in uu ku siiyo koobbiga heshiiska kirada ah, kireeyaha waxaa loo diidi karaa in uu heshiiskaas ku isticmaalo maxkamad.
Guud ahaan waxaa jira 2 nooc oo kiro ah, heshiis kiro oo go'an iyo heshiis kiro oo ah xilli Nooca heshiiska kirada ee aad haysato ayaa saameynaya xuquuqdaada sharciga ah ee kirayste ahaan.
Heshiiska kirada wakhtigiisu go'an yahay waa heshiis wakhtigiisa loo muddeeyey. Heshiiska kirada ee noocan ah waxa uu ku egyahay taariikh cayiman. Xaqa aad u leedahay in aad ku noolaato guriga kirada ah ayaa ku eg taariikhdaas. Kirada muddo lagu cayimo sida caamka waa 6 bilood ama 1 sano. Si aad u joojiso heshiiska kirada ee go'an ee taariikhda la sheegay, inta badan looma baahna in aad siiso milkiilaha ogeysiis qoraal hormaris ah. Qaar ka mid ah heshiisyada muddada go'an ayaa sheegaya in ogeysiis lagaa rabo, laakiin waa in marka hore lagu qoro heshiiska kirada. Xeerarka qaarkood ayaa khuseyn kara haddii ay kiradaadu tahay mid ay kabto dowladda. Eeg qeybta Guriyeynta iyo Kaabista Dadweynaha ee buug-yarehan laga bilaabo bogga 53-aad.
Waxaa laga yaabaa in lagaa yeelo inaad joogto ka dib heshiiska kirada ee go'an markuu dhammaado haddii aad isku raacdaan adiga iyo kireeyaha. Waxa kale oo aad ku sii noolaan kartaa haddii uu kireeyuhu kaa aqbalo kirada ka dib marka uu heshiisku dhammaado. Haddii kireeyuhu aqbalo kirada guriga ka dib markuu heshiisku dhammaado laakiin uma baahna inaad saxiixdo heshiis cusub, balse waxaa si toos ah kuugu bilaabanaya heshiis ah bil-bil.
Qaar ka mid ah heshiisyada muddada go'an ayaa wata dibu-cusbooneysiin toos ah. Taas macnaheedu waa in heshiiska la cusbooneysiiyay (laga kordhiyay) muddadii asalka ahayd haddii aadan kireeyaha siin ogeysiis qoraal ah oo horudhac ah oo aad qorsheyneyso in aad ka guurto dhammaadka muddada heshiiska ka dib. Kireeyaha waa in uu ku siiyo ogeysiis hordhac ah si heshiiska kirada si toos ah laguugu cusbooneysiin doono. Ogeysiiska hordhaca ah waa in lagu sameeyo 15 ilaa 30 maalmood ka hor wakhtiga kama-dambeysta ah ee aad guuri karto. Iska hubsi heshiiskaaga kirada ilaa ogeysiiskaaga ugu dambeeya. Haddii uusan milkiiluhu bixin ogeysiis, heshiiska kirada lama cusbooneysiin doono muddadii asalka ahayd. Haddii milkiiluhu ku siiyo ogeysiiska cusboonaysiinta, waa in aad milkiilaha ogeysiis qoran ku siiso sababta aad u guureyso ka hor wakhtiga kama dambaysta ah. Haddii kale waxaa lagaa rabaa lacagtii kiradda ee muddada heshiiska markaad guurto.
Heshiiskan waa kiro aan lahayn taariikh go'an ama cayiman. Waa hal xilli oo kiro ah ilaa mid kale inta uu kireeyaha guriga ama kireystuhu ay ka buriyaan heshiiska. Kirada nooca ah bil-bil ayaa ah nooca ugu caansan ee kirada xilliga ah.
Si loo joojiyo heshiiska kirada xilliga ah, kireeyaha ama kireystaha waa in laga helo ogeysiis qoraal ah ugu yaraan hal xilli kiro oo buuxa ka hor. Taas macnaheedu waa haddii aad rabto in aad heshiiska joojiso, oo waa in aad kireeyaha siiso qoraal ah ogeysiis maalinta ka horaysa bixinta kirada bisha ugu dambeysa. Haddii milkiilaha guriga uu rabo in uu buriyo heshiiska kirada waa in laga helo qoraal ah ogeysiis si isku mid ah.
Tusaale ahaan, waxaad tahay kireyste guri ugu jira bil-bil ama xilli ah heshiis kiro, oo waxaad rabtaa inaad guurto 1-da Juun. Bisha kuugu dambeysa waxay noqon doontaa Meey kiradeeda oo bisha Meey waxay ku egtahay 1-da Meey. Waa in aad kireystaha siiso ogeysiis ah qoraal oo aad ku rabto in aad guurto ugu dambeys saqda dhexe ee 30-ka Abriil.
Nooc kastoo kireysi ah oo aad ku gasho, waa kuu fiican in uu qoraal kuu yahay si looga fogaado dhibaatooyinka dambe ee idiin dhexayn kara adiga iyo kireeyaha. Haddii kireeyuhu uusan heshiiska qoraal ka dhigin, kireystaha u soo dir waraaq aad ugu sheegeyso waxa aad u maleyneyso in ay yihiin xeerarka heshiiska. Koobbi ah warqaddaas adigu naftaada u hayso. Heshiiska afka ah wuxuu noqon karaa mid sharci ah oo ah khasab sida heshiisyada qoran, laakiin waxaa adkaaneysa in la caddeeyo waxa heshiiska ku jira. Koobbiga warqaddaada ayaa kugu caawin karta in aad ku caddeyso waxa ku jira heshiiskaaga afka ah.
Ka hor intaadan saxiixin heshiiska kireeyaha, si taxaddar leh u akhriso dhammaan waraaqaha. Iska hubso in aad si buuxda u fahamto heshiiska ka hor inta aadan saxiixin. Haddii aad rabto inaad beddesho mid ka mid ah shuruudaha heshiiska kirada, waa in aad sameyso waxyaabaha soo socda:
1. Kala hadal kireeyaha shuruudaha kirada ee kala duwan. Si deggan oo edeb leh ugu sheeg kireeyaha isbeddelka aad rabto in lagaa sameeyo. Haddii uu kireeyuhu oggolaan waayo isbeddelka aad rabto, si deggan oo edeb leh ugu sharrax sababta aad u doonayso isbeddelka. Eeg haddii aad adiga iyo kireeyuhu ku heshiin kartaan waxyaabaha aad isla fahamteen.
2. Haddii kireeyuhu kugu raaco isbeddelada, qor dhammaan isbeddelada aad isku raacsan tihiin ee heshiiska kirada. Arrintaas waa muhiim sababto ah haddii uu dhib jiro, waxaa suurtagaleysa in aadan caddeyn karin isbeddellada aad af ahaan u oggolaatay.
3. Adiga iyo kireeyaha waa in aad ku qortaan xarfaha bilowga magacyadiina dhammaan isbaddel kasta.
4. Ka dib marka isbeddelada oo dhan la sameeyo oo la shaaciyo; adiga iyo kireeyuhu waa in aad wada saxiixdaan heshiiska kirada.
Waxaad sidoo kale ka codsan kartaa kireeyaha in uu saxiixo heshiiskaas aad adigu qortay. Eeg bogga 64-aad linki ah tusaalaha foomka heshiiska kirada.
MAR KASTA KOOBBI ADIGU KA REEBO HESHIISKA KIRADA
Heshiiska kirada waa waajib isku xiraya kireystaha iyo kireeyaha. Arrintaas macnaheedu waa in adiga iyo kireeyaha waa in aad raacdaan xeerarka heshiiska kirada. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah
marka uu heshiisku bilaabanayo iyo marka uu dhammaanayo
marka kirada la bixinayo
marka la bixinayo ogeysiiska guriga looga guurayo
cadadka lacagta curaarta ah iyo waxa uu dabooli karo
waqtiyada uu kireystuhu soo geli karo guriga
sharciyada barxadda baabuurta
qofka bixiya kharashka kuleyliyaha, nalalka, biyaha, iyo adeegyada kale
sida dayactirka loo sameyn doono
xayawaanka rabbaayadda ah
Kireeyuhu kuuma sheegi karo in aad sameyso dayactirka ama hawlo ah dayactir (sida beerta guriga) ilaa aad qoraal ahaan ku oggolaato oo lacag lagugu siinayo shaqada. Lacagta kirada ayaa lagaa yareynayaa adiga oo kireyste ah ama lacag toos ah ayaa kireeyuhu ku siin karaa.
Kireystuhu wuxuu codsiga kirada guriga kugu weydiin karaa magacaaga oo buuxa iyo taariikhda dhalashadaada si uu macluumaadkaas ugu dhex haysto heshiiskaaga kirada.
Sharciga Minnesota ayaa ku xadeynaya lacagta la isku soo dalacayo kirada xilliga lala soo daaho ganaax ah 8% lacagta kirada aan la bixin. Haddii aad ku nooshahay guri ay dowladdu kabto (tusaale barnaamijka Section 8) lacagta ganaaxa waxaa laga yaabaa in ay ka sii badato oo keliya haddii uu sharciga federaalku u oggol yahay.
Waxaad xaq u leedahay lacagta qareenka haddii aad u baahan tahay in aad iska difaacdo dacwad ama aad ku dacweysid kireystaha wax la xiriira heshiiska kirada, oo kireystuhuna wuxuu heli karaa lacagta qareenka haddii uu adiga ku dacweeyo.
Sharciga Minnesota sida uu qorayo, heshiiska kirada oo qoran ama hadal ah, inaan loo oggolaan doonin in waxyaabaha sharci darrada ah qaarkood ay guriga ku sameeyaan kireystaha ama kireeyaha. Wixii sharci darro ah oo ay ka mid yihiin dhilleysi ama hawlaha la xiriira, sharci-darro in lagu haysto ama haysashada hub, ama soo-saarista, iibsashada, haysashada, iibinta, qeybinta ama wax ah daroogo sharci darro ah ama hanti la soo xaday meel kasta oo ka mid ah dhismaha, oo waxaa ku jira goobaha la wadaago. Sharcigan ma tuuri karaan ama ma beddeli karaan kireystaha ama kireeyaha.
Haddii aad jebiso ballanqaadka heshiiska, waxaad waayeysaa xuquuqdii aad guriga ku sii joogi lahayd. Kireeyuhu wuxuu soo cosdan karaa dacwad maxkamadeed oo ah guri-ka-saarid (ama degid sharci darro ah) oo kaa dhan ah oo ah jebinta heshiiska. Kireeyuhu wuxuu sidaas sameyn karaa ogeysiis la'aan haddii sharciyada la jebiyo. Dacwad-dhageysiga ka-saaridda guriga si dhakhso ah ayaa loogu qaban doonaa ilaa 5 maalmood ka dib marka kireeyaha guriga uu bilaabo habraaca ah ka-saaridda.
Waxaa jira shuruudo kiro oo ay tahay in aad iska ilaaliso. Iska hubso in uusan heshiiskaagu ahayn mid ay ku jiraan waxyaabaha soo socda
Inaad oggolaato kireeyuhu in uu gurigaaga ka soo galo mar kasta oo ay tahay. Kireeyuhu ma soo geli karo gurigaaga ilaa aad goor hore adigu ka hesho ogeysiis, ama markay jirto xaalad degdeg ah. Haddii uu heshiiska kirada dhigayo in kireystuhu kormeeri karo ama uu dad kale tusi karo guriga kireystayaal cusub wakhti kasta, iyada oo uusan kireeyaha guriga ku siin ogeysiis wakhti macquul ah, waa shuruud sharci-darro ah oo waa inaad codsato in heshiiska wax laga beddelo. U beddel oo ku akhri "kireeyaha waxa uu guriga soo geli karaa oo keliya wakhtiyo macquul ah ka dib 24 saac oo ogeysiis hordhac ah si loo dayactiro guriga ama loo tuso guriga kireysteyaal mustaqbalka ah." Eeg qeybta Xuquuqda Shakhsiyadda Gaarka ah ee buug-yarehan ee bogga 17-aad. Xusuusnow in kireytuhu ku qoro xarfaha magaca meelaha la beddelay ee heshiiska.
Qodobka "horu-marinta ama isku-darista kiro badan." Taas macnaheedu waa in aad wada bixiso kirada muddada kirada oo dhan haddii aad la soo daahdo bixinta kirada ee bil kasta.
Inaad kireeyaha u oggolaato inuu sameeyo sharciyo cusub oo ah mid si toos ah u dhaqan gala ama sameeya iyadoon la cayimin kirada oo la kordhiyo inta lagu jiro muddada heshiiska.
Tusaalooyinka guud ee shuruudaha kirada sharci darrada ah waxaa ka mid ah kuwaas
Marka ay qoran tahay in kireeyuhu guriga kaa saari karo maxkamad la'aan
Marka ay qoran yihiin in aysan kireeyaha khasab ku ahayn dayactiridda gurig sida sharcigu qabo
Marka heshiisku dhigayo in uusan bixineyn waxa guriga ka jaba xataa haddii uu khaladka ka socdo dhinaca kireystaha ama
Marka heshiisku dhigayo kireeyuhu in uu iska haysan karo curaarta guriga markaad guriga uga guurto muddo cayiman gudahood, sida 6 bilood.
Kireeyuhu ma awoodi karo in uu dadka ku khasbo shuruudo sharci-darro ah oo lagu qoro heshiiska. Haddaba, haddii aad saxiixday heshiis ah kiro oo ay ku jiraan shuruudo ah sharci-darro ah, marna ha raacin wax sharci-darro ah.
Markaad kireysato guri, meel oo aamin ah gasho heshiiska kirada, caddeyn curaarta iyo kirada, liiska kormeeridda guriga, waraaqaha, iyo xaashiyaha kale ee muhiim ah oo dhan.
Waxay aad muhiim kuugu ah in aad meel fiican ku xafidato caddeymaha lacagta aad bixisay. Kireeyaha guriga waa in uu ku siiyo caddeynta kirada haddii aad lacag caadi ah siiso.
Haddii aad bixiso money order, waa inaad waraaq caddeyn ah ka hesho kireeyaha guriga. Laakiin qeybta dambe ee money order waa caddeyn oo kale inaad siisay kireeyaha lacagta kirada, waxaa ku qoran taariikh ah ama ku dhow taariikhda kirada la bixiyay, oo kireeyaha guriga ayaa qaadan kara oo lagu qoraa. Haddii uu kireeyaha gurigaaga ku tuso in kirada in aan la qorin kiro aad bixisay, waxay noqoneysaa in aad caddeyn ahaan u tusto money order aad dirtay.
Ka taxaddar haddii aad aragto in kireeyuhu uusan rabin inuu ku siiyo caddeyn. Taas macnaheedu waa in ay dhibaato badan kugu imaan karto mustaqbalka.
Ka taxaddar dadka aad guri wada degeysaan. Qof kula deggan markuu sharciga jebiyo guriga ayaa la idinka saari karaa. Sidoo kale adiga ayaa masuul ka ah haddii uu kirada bixin waayo qofka kula deggen. Haddii ay dad ka badan hal qof guri wada kireystaan, qof kasta asaga ayaa sharci ahaan masuul ka ah bixinta kirada gebi ahaan. Taas macnaheedu waa in haddii qof kula deggen bixin waayo qeybtiisa kirada, qof kale waa in uu ka sii bixiyo. Haddii uu qof kula deggen iska guuro, adiga ayaa kiradii lagaa rabaa ama kireeyuhu guriga ayuu kaa saari karaa. Laakiin waax dacweyn kartaa qofka kula deggen haddii uu iska guuro isaga ama iyada oo aan kiradii bixin. Xaaladaha qaarkood, heshiiska ayaa lagu qoraa in aad adigu masuul ka tahay kirada qeybtaada oo keliya. La xiriir qareen ama xafiisyada taageera kiresyteyaasha haddii ay sidaas kugu dhacdo.
Kireyste kasta oo ku nool Minnesota waxa uu leeyahay xuquuqaha soo socda:
Kireeyuhu waa in uu raaco sharciyada kirada ee qoran.
Kireeyuhu waa in uu guriga ka dhigo meel aan khatar lahayn oo leh caafimaad iyo badqabid.
Kireeyuhu waa inuu guriga si fiican u dayactiro. Qaab dhismeedka, sameynta, tubbooyinka iyo qalabka waa in laga dhigo wax u shaqeeya si lagu badbaado oo sax ah.
Kireeyaha guriga waa in uu raaco sharciyada hagaajinta cimilada guriga, kuleylka inuusan ka bixin oo ay dabaylaha duufaanka u adkeysan karaan albaabada iyo daaqadaha.
Waxa ay dadku xaq u leedahay in ay la xiriiraan xafiisyada guryaha deegaanka, caafimaadka, amniga, iyo kormeeridd dabdamiska iyaga oo weydiisanaya in kormeerid loo sameeyo guriga (haddii ay adeegyadaas sameeyaan).
Dhismaha guriga waa in dhinac kasta laga gufeeyo haddii guriga la dhisay 1976 ka hor.
Waxaad xaq u leedahay in aad la xiriirto booliiska ama caawimaad degdeg ah sida tacaddiyada guriga gudihiisa ama wax kale. Kireeyuhu ma ciqaabi karo dadka soo dacweeya. Sida uu sharciga dhigayo. Kireeyaha waa la dacweyn karaa haddii uu jebiyo sharciga.
Waxaad xaq u leedahay xogdhowrid iyo in aad xaq u leedahay kireeyaha in uusan oggolaansho la'aan guriga kirada ah iska gelin. Kireeyuhu waxa keliya oo uu guriga soo geli karo waa haddii ay ku qoran tahay heshiiska kirada, ama haddii ay jirto xaalad degdeg ah, ama haddii ay jirto hawl kale oo macquul ah si uu u soo galo oo marka aad ka hesho ogeysiis macquul ah. Xusuusnow, xataa haddii heshiisku dhigayo in kireeyuhu soo geli karo guriga idin la'aan, weli waa in laga helo ogeysiis macquul ah.
Kireeyaha waa in uu dadka siiyo magaciisa ama cinwaankiisa.
Kireeyaha ma joojin karo heshiiska, kirada in la kordhiyo, ama ma goyn karo wax adeegyo ah iyada oo aan dadku ka helin ogeysiis qoraal ah.
Kireeyuhu guriga kaama saari karo ama kaama aarsan karo (waxba kuma yeeli karo) cabashadaada awgeed ama in aad ogaatay xuquuqdaada kireyste ahaan.
Minneapolis iyo magaalooyin kale oo badan, kireeyuhu waa in uu haysto shati ama leysan.
Kireeyaha guriga ma goyn karo korontada, biyaha ama ma beddeli karo furaha guriga.
Kireeyaha dadka kuma khasbi karo in ay ka guuraan guriga iyada oo aan maxkamad la aadin.
Waxaad xaq u leedahay in lagu soo celiyo lacagtii curaarta, oo ay dulsaar la socoto, 3 toddobaad gudahood (21 maalmood) ka dib markaad guurto oo aad kireeyaha siiso cinwaankaaga cusub. Arrintaas ma shaqeyneyso haddii dhismaha dhib lagu arkay (eeg bogga 28-aad). Laakiin kireeyaha waxa uu reeban karaa in macquul ah oo curaarta ka mdi ah si loogu hagaajiyo waxyaabaha jaban iyo kirada aan la bixin. Haddii kireeyuhu sidan sameeyo waa in ay laga helo sharraxaad qoraal ah saddex toddobaad gudahood. Kireeyuhu dadka kuma khasbi karo in ay lacag ka bixiyaan wax kasta oo u dhammaada si caadi ah.
Kireeyaha uma haysan karo alaabadaada shakhsiga ah kirada aad bixin weydo.
Kireeyaha waa in uu ku siiyo waraaqda caddeynta kirada ah ee sannadkii la bixiyay (CPR) si aad ugu buuxsato canshuurta guryaha ee gobolka.
Kireeyaha waa in uu kuu soo sheego kormeerid hore oo guriga dhib looga helay iyo wixii ganaax ah oo horay looga qaaday (eeg bogga 28-aad).
Haddii kireeyuhu kugu soo dallaco lacagta codsiga, kireeyuhu waa in uu kuu sheegaa magaca, cinwaanka iyo lambarka taleefanka ee shirkadda baarista kireystaha ee ay isticmaali doonaan.
Haddii kireeyuhu qof ku dallaco lacag curaar hormaris ah (oo sidoo kale la yiraahdo "horumariska-la-haynayo") ka dibna ay qofkaas guriga kireyn waayaan, waa in qofkaas lacagta loogu soo celiyo 7 maalmood gudahood.
Haddii aad tahay dhibbane ay ku dhacday tacaddiyada qoyska gudihiisa oo aad haysato Amar Maxkamadeed oo aad Ammaan ku Hesho oo ah Inaan Lagula Soo Xiriir la'aan, heshiiska ayaad jebin kartaa (eeg bogga 34-aad).
Waajibaadka soo socda ayaa laga rabaa kirayste kasta.
Haddii kireeyuhu rabo dad uu xog ka soo baarto marka laga codsaneyo guriga, waa khasab in la siiyo.
Waa in kirada lagu bixiyo wakhtigeeda.
Waa in la raaco xeerarka heshiiska (laakiin khasab ma aha in la raaco waxyaabo sharci darro ku ah heshiiska).
Waa in la bixiyo wixii waxyeello ah ee ka badan duugowga iyo jeexjeexidda caadiga ah ee guriga haddii kireeyuhu masuul ka yahay.
Waa in aan la carqaladeyn kireysteyaasha kale ee guriga.
Waa in la bixiyo ogeysiis qoraal ah wakhti sax ah marka laga guriga laga guuriyo.
Kireeyaha looma oggolaan karo waxyaabo sharci darro ah oo ay ka mid yihiin dhilleysi ama hawlaha la xiriira, sharci-darro in guriga lagu haysto ama haysashada hub, ama soo-saarista, iibsashada, haysashada, iibinta, qeybinta ama wax ah daroogo sharci darro ah ama hanti la soo xaday meel kasta oo ka mid ah dhismaha oo waxaa ku jira goobaha la wadaago.
Kireeyuhu marnaba ma soo gali karo guriga laga kireystay haddii aysan jirin arrin muhiim ah IYO in laga helo ogeysiis. Sharcigaas ma khuseeyo xaaladaha degdegga ah.
Waa in aan kireeyaha lagu dhibin soo-gelidda guriga marka la sameynayo dayactir. Waxaa fiican in mar hore laga heshiiso marka guriga la soo gali karo. Waxaa fiican in heshiiska lagu qoro iyo in uu qof kasta koobbi ka hayso.
Sabab Muhiimka ah
Kireeyuhu waa in uu haysto sabab muhiim ah oo uu u soo gali karo guriga. Tusaaleyaasha sababta muhiihka ah waxaa ka mid ah
in guriga la tuso kirayste cusub oo raba inuu iska eego
in guriga la tuso iibsade, wakiil ka socda ceymiska, ama qiimeeye
in la sameynayo shaqo ah dayactirka
in la oggolaado shaqaale dowladeed oo sameynaya kormeerid
marka uu kireyste guriga dhex ku sameynayo carqalad
kireeyuhu markuu aaminsan yahay oo ay macquul tahay inaad jebineyso sharciyada kirada guriga
kireeyuhu markuu aaminsan yahay oo ay macquul tahay in uu jiro qof aan lagu ogeyn oo guriga ku dhex nool
markaad guriga ka guurto ama ka baxdo
Guud ahaan, haddii kireeyuhu bixiyo ogeysiis uu ku soo gelayo guriga iyadoo ujeedku yahay mid macquul ah. Xusuusnow, sharcigaas ma khuseeyo xaaladaha degdegga ah. In ogeysiis la bixiyo waxaa noqon kara in farriin la isugu duubo taleefan ama in farriin qoraal ah la isugu dhejiyo albaabka. Ogeysiiska lagu soo gelayo guriga waa in uu macno sameeyo sabab jirta awgeed.
Tusaale ahaan, haddii uu kireeyuhu ballan u qabto tuubbiiste toddobaad ka hor, kireeyuhu waa in uu sii sheego ballantaas toddobaad ka hor. Haddii kireeyuhu ogaado kormeeridda maamulka magaalada oo jirta subaxa ka horreeya maalintaas, waa in uu kireeyuhu sii sheego isla marka uu hawsha ogaado.
Xaalado gaar ah oo keliya ayuu kireeyuhu soo geli karaa guriga ogeysiis la'aan. Haddii kireeyuhu haysto sabab macquul ah oo uu ugu maleeyo inay jirto waxyaallo socota ogeysiis la'aan ayuu guriga ku soo geli karaa. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah:
in uu si degdeg ah kireeyuhu u soo geli karo waa lagama maarmaan si loo ilaaliyo dadka ama hantida in aysan waxyeello ka soo gaarin dayactirka, xaaladaha amniga iyo booliska awgood
in uu si degdeg ah kireeyuhu guriga u soo geli karo waa lagama maarmaan si loo hubiyo badqabidda dadka
in uu si degdeg ah kireeyuhu guriga u soo geli karo waa lagama maarmaan markay jiraan waxyaabo sharci darro ah oo socda
Haddii kireeyuhu guriga soo galo marka aadan joogin oo uusan bixin ogeysiis, waa in laga helo ogeysiis qoran oo ssheegaya in guriga la soo galo iyo sababta soo-gelidda.
Kireyste kasta waxa uu sharci-ahaan fulin karaa xuquuqdiisa shakhsiga ah. Haddii kireeyuhu soo galo isagoon bixin ogeysiis, waa lagu dacweyn karaa arrintaas. Waxaa la codsan karaa yarenta kirada, waxaa la heli karaa lacagtii curaarta iyo $100 oo ah xadgudub kasta oo ah xuquuqda shakhsiga ah. Waxaa sidoo kale la sameyn karaa dacwo ah sharci-fulinta xuquuqda shakhsiga ee xaqiijinta kirada Rent Escrow (eeg bogga 23-aad). Haddii dhibaatadu sii socoto, waxaa laga yaabaa in sidaaa looga baxo heshiiska kirada. Waa in lala xiriiro qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee degmada haddii loo baahdo caawimaad ah qoraal iyo in la dirsado cabashada ah xuquuqda shakhsiga ah.
Markaad kiro bixiso, lacagtaas qaarkeed waa canshuurta dhulka guryaha aad ku nooshahay. Kireysteyaasha Minnesota qaarkood waxaa loo sooo celin karaa qeyb ka mid ah lacagtii kirada. Kirada la soo celiyo waxay ku xiran tahay dakhliga iyo kirada la bixiyey sannadka oo dhan. Waxaad canshuur-celiska ku heli kartaa haddii aad kireysato dhisme uu kireeyuhu ka bixiyo canshuuraha dhulka iyo haddii uu dakhligaagu ka hooseeyso heer gaar ah.
Si loo codsato canshuur-celinta kirada, waa in Waaxda Canshuuraha ee Minnesota in loo dirsado waxyaabaha soo socda:
Foomka canshuur-celiska kirada oo dhameystiran (M1PR), iyo
Waraaq ah "Caddeynta Kiradii la Bixiyey" (CRP).
Waa in la xareysto canshuur-celiska kiradainta ka horreysa 15-ka Ogoosto sannad kasta.
Kireeyuhu waa inuu kireysteyaasha siiyo Caddeynta Bixinta Kirada (CRP) ugu dambeyn ilaa 31-ka Janaayo ee sannad kasta.
Haddii Kireeyuhu soo Diri Waayo Caddeynta Kirada ama CRP
Haddii kireeyuhu soo diri waayo CRP, waa in lala xiriiro kireeyaha iyo in la xusuusiyo. Haddii aadan helin caddeynta CRP, waa in la sameeyo waxyaabaha soo socda:
Warqad waa in loo qor kireeyaha. Ku qor kharashka kirada aad bixisay sannadka oo ka codso caddeyntaada CRP. Koobbi ka reebo caddeynta. Haddii aan la helin jawaab ilaa iyo laba toddobaad, waa in la sameeyo sida soo socota
La xiriir Waaxda Canshuuraha oo ka codso in ay ku ganaaxaan kireeyaha in uusan ku siin caddeynta CRP.
Ka Codso Waaxda Canshuuraha ee Minnesota (MDR) Warqad Dhaar Caddeyn u ah Bixinta Kirada (RPA) si loo buuxiyo intii la buuxin lahaa CRP. Waxaad farriin (email) u soo dirtaa individual.incometax@state.mn.us ama soo garaac 651-296-3781 ama 1-800-652-9094 (lacag la'aan). Macluumaad dheeraad ah waxaa laga heli karaa https://www.revenue.state.mn.us/renters-property-tax-refund. Waa in aad haysato waraaqo ama caddeyn kale oo ah kiradii la bixiyey. Haddii aadan haysan caddeyn, isticmaal heshiiska ama boostada aad ka heshay cinwaanka iyo caddeyn kale si aad u muujiso in aad halkaas ku nooshahay oo ay gobolku u qaataan in kirada la bixiyey.
Waxaa canshuurta kirada la isu soo celiyaa bisha Ogoosto ama Sebtembar, ama 60 maalmood ka dib marka ay Waaxda Canshuuraha hesho codsigaaga canshuur-celinta kirada. Haddii aad su'aalo ka qabto, la xiriir Waaxda Canshuuraha ee Minnesota (651) 296-3781.
Kireeyaha waa inuu guriga u dayactiro si habboon oo ku fiican oo loogu noolaan karo. Waxa kale oo jira shaciyo khuseeya gobolka oo dhan, korontada, dabdamiska, iyo caafimaadka. Magaalooyinka iyo deegaanka qaakiisa waxay leeyihiin xeerar ah dayactiridda guryaha oo waxay ku faahfaahsan yihiin sharciyada dayactirka laga rabo kireeyaha. Haddii aadan ogeyn in magaaladaadu leedahay sharciyada dayactirka, la xiriir xafiiska kormeeridda guryaha ama xoghayaha magaalada.
Dhibaatooyinka dayactirka guud waxaa ka mid ah:
fiilooyin cilladaysan ama dabacsan
tuubbooyin biyo ka daataan ama hoos u geli waayaan
qalab guriga oo aan shaqeyneyn
daaqado jajaban, shaashad la'aan, ama daaqado aan celineyn dabeylaha duufaanka ah
malaasid soo dhacaysa
albaab aan meel la qabto lahayn ama dabsheege la'aan
cayayaan ama jiir.
Haddii aad dhibaato ku qabtid cayayaanka ama jiirka, caddayn diyaarso, sida cayayaanka/jiirarka dhintay ama saxaradooda oo tus kormeere ama maxkamad.
Tallaabada ugu horreysa ee wax lagu dayactirayo waa inaad la xiriirto kireeyaha. Haddii aad dhibaato ku qabto in kireeyuhu wax hagaajiyo ka guriga, waxaa jira 3 siyaabood oo ay maxkamad kireeyaha ugu khasbi karto dayactirka:
Codso kirada maxkamaddu hayso ama Rent Escrow (lacagta kirada u gee maxkamad). Eeg bogga 23.
Dacwee adigoo cuskanaya Sharciga Xal-helidda Kireysteyaasha Minnesota. Eeg bogga 24.
Dacwada ah Sharciga Xal-helidda Kireysteyaasha soo dirso si aad ugu hesho in si degdeg ah amar dayactirid ah. Eeg bogga 24.
Haddii uusan kireeyuhu sameyn waayo dayactirid, kireystuhu wuxuu soo xareysan karaa Kirada Maxkamadda oo ah kiis maxkamadeed. Sida uu dhigayo sharciga Kirada Maxakamadda, kireysteyaashu waxay kirada geeyaan maxkamad, intii ay siin lahayeen kireeyaha, waxayna ka codsadaan maxkamadda inay ku amarto kireeyaha in uu guriga wax ka hagaajiyo, in uu raaco shuruudaha heshiiska, ama in uu u hoggaansamo sharciyada gaarka ah ee gobolka. Waxyaabaha soo socdaa waa xeerarka iyo nidaamyada kirada maxkamad la geeyo. Xeerarkan iyo habraacyadan waa in khasab in la raaco. La xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga ka hor intaadan bilaabin kiiska kirada la geeyo maxkamad (Rent Escrow).
Ka Hor Intaadan Kiradaada Ku Bixin Maxkamadda
Waa in aad sameyso mid laba arrimood ka hor intaadan kiradaada ku bixin maxkamadda oo aadan bilaabin a Kirada Maxkamadda oo kiis ah. Waxaa fiican inaad sameyso labadaba, laakiin waa in aad keliya sameyso mid ka mid ah waxyaabaha soo socda:
Adeegso foomka la yiraahdo “Liiska Dayactirka Kireystaha” oo ka eego bogga 68 si aad waraaq ugu qorato kireeyaha oo ku weydiiso in laguu sameeyo dayactir. Waraaqdu waa in u ku qoran yahay magacaaga, cinwaankaaga, iyo liis qoran oo ah wax kasta oo aad rabto in laguu hagaajiyo. Saxiix warqadda oo ku qor taariikhda. Koobbi ah warqadda adigu naftaada u hayso. Kireeyaha wuxuu haystaa 14 maalmood oo uu ku sameeyo dhammaan dayactirka laga bilaabo wakhtiga ay gaarto warqadda. Haddii dayactirka oo dhan aan lagu sameyn waayo 14 maalmood ka dib waxaad waraaqda u qaadan kartaa maxkamadda si aad u xareysato Kirada Maxkamadda.
La xiriir kormeeraha guryaha ee deegaankaaga. Kormeeraha guryaha wuxuu imaan doonaa gurigaaga si uu ugu sameeyo kormeerid. Kormeeraha ayaa qori doona warbixin lagu gaarsiiyo kireeyaha wakhti cayiman oo uu guriga ku dayactiro. Weydiiso koobbi ah warbixinta. Waxaad warbixintaas u qaadan doontaa maxkamad si aad u xareysatid dacwada kirada maxkamadda. Haddii waaxda kormeerku ku amarto kireeyaha in uu dayactirka ku sameeyo taariikh cayiman, adigu waa in aad sugaa ilaa taariikhdaas ka dib si aad u bilowdo kiiska kirada maxkamadda. Haddii aad rumeysan tahay in uu kormeeruhu siiyay milkiilaha wakhti badan oo lagu sameeyo dayactirka, waa in aad maxkamadda fahamsiin karto sababta waktigu kuula dheer yahay.
Waxaaa fikrad fiican ah in kormeerid lagu sameeyo gurigaaga haddii uu jiro kormeere jooga deegaankaaga. Xataa haddii aad warqad u qorto kireeyaha oo aad weydiisato dayactirid, weli waxaad u baahan kartaa in aad la xiriirto kormeeraha guryaha. Maskaxda ku hay in kormeeraha uu siin karo kireeyaha guriga in ka badan 2 toddobaad si uu u xal ugu helo dhibaatooyinka jira.
Si aad u codsato kormeerid waa inaad sameyso waxyaabaha soo socda
La xiriir kormeeraha guryaha ee xaafadda oo weydiiso kormeerid.
Inta kormeerka socdo, kormeeraha tus guriga meel kasta, qol kasta. Weydii haddii ay gurigaaga ka jiraan waxyaabo ah xadgudub sharci ah.
Kormeeraha la qaado koobbi ah warbixinta kormeeridda. Sidoo kale, ka qaado koobbi ah Amarka Dayactirka, haddii uu ka duwan yahay warbixinta kormeeridda.
Weydii kormeeraha inta uu kireeyuhu haysto si uu u sameeyo dayactiridda.
Haddii aadan ku qanacsanayn kormeerka, dacwo u gyso maamulaja kormeeraha. Weydiiso kormeeraha magaca iyo lambarka taleefanka maamulka sare. U garaac lambarka sida ugu dhakhsaha badan oo u sheeg walaaca aad qabto.
Haddii dayactirka loo sameyn waayo sidii la isku amray, waxaad codsan kartaa kormeerid kale si looga caddeeyo in aan dayactiridda la sameyn.
Waxay ku xiran tahay meesha aad ku nooshahay, waaxda kormeerka ayaa dabagal ku sameyn doonta kireeyaha si loo arko in dayactiridda si sax ah loo sameeyay. Kireeyaha wuxuu la kulmi karaa ganaaxyo ama dhibaato kale haddii uusan dayactiridda sameyn. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad mar kale u yeerto kormeeraha si uu mar labaad u kormeero haddii aan dayactirka lagu sameyn wakhtigii kama-dambeysta ahaa. Ama waxaad warbixinta kormeerka u adeegsan kartaa si aad u bilowdo dacwada Kirada Maxkamadda.
Waa in aad gebi ahaan kirada lagaa rabo u geyso xoghaynta maxkamadda degmada marka aad xareynayso dacwada Kirada Maxkamadda. Haddii aan lagugu lahayn kiro, uma baahanid inaad maxkamadda kiro geyso. Laakiin ilaa kiisku dhammaado, waa in aad kiradaada bil kasta ku bixiso maxkamadda. Waxaa jirta lacay lagu xareeyo markaad bilaabeyso kiiska maxkamadda ama Rent Escrow, laakiin maxkamaddu waa ayaa kaa dhaafi karta (cudurdaareysa) lacagta haddii aadan awoodin.
Waa in aad xoghaynta u geyso mid ka mid ah warbixinta kormeeraha (koobbi sharciyeysan ayaa ugu fiican) ama koobbi ka mid ah waraaq aad u qortay kireeyaha oo aad ku weydiisatay dayactirid.
Sidoo kale waa in aad u sheegtaa xoghaynta magaca kireeyaha iyo cinwaanka adigoo qiyaasaya lacagta ay ku kacayso hagaajinta.
Xoghaynta maxkamadda ayaa kaa caawin karta in aad hesho codsi ah Kirda Maxkamadda, ama waxaad isticmaali kartaa foomka kirada maxkamadda oo loo yiraahdo 'Rent Escrow Affidavit' ee bogga 71. Waxaad u baahan doontaa in aad xoghaynta maxkamadda u dhiito Waraaqda Dhaarta ah, waraaq aad u dirtay kireeyaha ama warbixinta kormeeraha guryaha, iyo gebi ahaan kirada lagugu leeyahay. Xoghaynta ayaa kuu sameyn doonta ballan ah dacwad-dhageysi.
Haddii qiyaasta kharashka dayactiridda uu ka yar yahay $15,000, xoghayntu waxa ay ogeysiis dacwad-dhageysi ah u diri doonaan kireeyaha.
Haddii qiyaasta kharashka dayactirka uu ka badan yahay $15,000, waa in aad haysataa qof (aan adiga ahayn) oo ogeysiiska dacwad-dhageysiga ah u geeya kireeyaha. Haddii aad dooneyso, shariifka ayaa ogeysiiska dacwada u geyn kara. Xoghaynta ayaa kuu sheegi karta meesha xafiiska shariifka oo qof jooga xafiiskaas ayaa ku caawin kara.
Dacwad-dhageysiga wuxuu dhacayaa 10 ilaa 14 maalmood ka dib markaad kirada ku bixiso maxkamada.
Keenso gebi ahaan markhaatiyaashaada dacwad-dhageysiga, sawirro (hadii ay hayso) iyo koobbiga waraaqaha iyo ogaysiisyada aad u dirtay kireeyaha. Haddii kormeerid la sameeyay, soo qaado caddeyn shaabadeysan oo ah koobbiga warbixinta kormeeraha. Koobbiga shaabadeysan waa mid ka soo baxay waaxda kormeeridda oo waa uu saxiixan yahay iaydoo lagu sheegayo in wax kasta oo ku qoran ay yihiin run iyo sax.
Waxa Maxkamaddu Sameyn Karto
Inay kireeyaha ku amarto dayactirka.
In lagaa yareeyo kirada inta dayactirku ka dhammaanayo.
Inay kuu oggolaato in aad adigu dayactirka sameyso oo aad ka goosato kirada.
In lagu amro kireeyuhu inuu dib u bixiyo qeyb ahaan ama gebi ahaan kiradii aad bixisay markii dayactirka laguu sameyn waayey.
In qof kale lagu amro in uu maamulo guriga iyo dayartirkiisa
In la ganaaxo kireeyaha.
In kirada lagu siiyo adiga ama kireeyaha.
In lagu amro kireeyaha in uu raaco heshiiskaaga kirada.
In lagu amro kireeyaha in uu u hoggaansamo sharciyada gobolka ee gaarka ah.
In lagu amro kireeyaha in uu bixiyo kharashka qareenka.
Kireeyaha guriga ayaa ku dacweyn kara si uu guriga kaaga saaro keliya haddii aadan bixin (dhigin) lacagta kirada oo dhan maxkamadda. Haddii aad dhigto lacagta kirada oo dhan, kireeyuhu gurig kaagama saari karo kirada oo aad bixin weyday awgeed. Haddii aadan haysan kirada oo dhan, waa inaadan soo xareysan dacwada kirada maxkamadda. Guriga ayaa lagaa saari karaa oo waxaad waayi kartaa lacagta aad dhigto maxkamadda.
Haddii kireeyuhu ku dacweeyo inta lagu jiro dacwada Kirada Maxkamadda, waa in aad inta hartay kirada lagu leeyahay keento dacwad-dhageysiga adgigoo ku daraya lacagta xareynta dacwada ee uu kireeyuhu bixiyey. Haddii uu kireeyuhu kuu sheegi waayo lacagta xareynta, waxaad weydiin kartaa xoghaynta maxkamadda.
Kireeyuhu kaama aargoosan karo (adiga waxba kuuma yeeli karo) diiwaangelinta kiiska Kirada Maxkamadda awgiis ama kiis kasta oo kale oo aad ku dalbatay dayactirid. Si kastaba ha noqotee, waa in aad raacdo shuruudaha heshiiskaaga kirada, xataa marka aad kirada ku bixinayso maxkamadda.
Haddii uusan kireeyuhu guriga wax hagaajin, uu raaci waayo heshiiska kirada, ama uusan ku xadgudbin sharciyada xuquuqda shakhsiga ah ee gobolka, waxaad keensan kartaa dacwad ka dhan ah kireeyaha sida ku xusan Sharciga Xalraadinta Kireystaha. Sharcigani wuxuu ka hadlayaa danbiyada guryaha, caafimaadka iyo amniga, iyo in laga soo bixi sameyn waayo dayactirka lagu heshiiyey xataa haddii uusan dhibka dayactirka ahayn xadgudub sharci ah. Si loo adeegsado sharcigan, waxaa fiican in aad hesho qareen. Sharcigan waxaa loo isticmaali karaa marka kireeyuhu diido in uu dayactiro oo uusan kireystuhu rabin in uu guuro ama guriga ayaa la xirayaa.
Haddii aad ku guuleysato kiiska Sharciga Xalraadinta Kireystaha, maxkamaddu
Waxay amri kartaa kireeyuhu in uu dayactirka sameeyo ama kireeyuhu amar maxkamadeed ayuu diiday
Waxay adiga kuu sheegeysaa in aad dayactirka sameyso oo aad ka goyso kharashka dayactirka kirada
Waxay magacaabeysaa qof inuu qaato kirada una isticmaalo inuu ku dayactir ama
Waxay amri kartaa in kirada lagaa yareeyo
Waxay kireeyaha ku amri kartaa in uu raaco heshiiska kirada
Waxay kireeyaha ku amri kartaa in uu raaco sharciyada u gaarka ah gobolka
Waxay amri kartaa dayactir degdeg ah oo la xiriira koronto la'aan iyo adeegyo kale ee lagama maarmaanka ah.
Waxay ku amri kartaa kireeyuhu in uu bixiyo kharashka qareenka.
Haddii ay kugu dhacdo xaalad degdeg ah sida kharashaadka ama adeegyada kale ee lagama maarmaanka u ah kireeyuhu guriga, waxaad soo xareysan kartaa Dacwada Xalraadinta Kireystaha ee Degdegga ah (ETRA). Uma baahnid in aad sugto 2 toddobaad inta ay ka dhacayso warqad ah dayactir oola diray oo uma baahnid in aad soo wacdo kormeeraha guryaha. Kireystuhu wuxuu ka codsan karaa maxkamadda amar ah hagaajin xaalad degdeg ah oo noqon karta:
ama adeegyada kale ee lagama maarmaanka ah ee uu kireeyuhu masuul ka yahay in uu bixiyo.
Waa inaad isku daydo in aad kireeyaha 24 saac ogeysiiso ka hor intaadan aadin maxkamad. Waa in aad taleefan kula xiriirto, oo haddii uu kireeyuhu uusan joogin, farriin uga tag qof kale oo u sheegi kara. Haddii aysan jirin hab looga tagi karo fariin, taleefan kula xiriir dhowr jeer wakhtiyo kala duwan maalintii. Hubso in aad qoroto wakhtigii aad taleefanka u dirtay iyo waxaad kala kulanto. Maxkamaddu waxa ay ku amri kartaa kireeyaha in uu dayactirka ku sameeyo, ama waxay ku amri kartaa wixii kale oo ah xal laga heli karo Dacwadda Kirada Maxkamadda
Dacwada Xal-raadinta (eeg bogagga 23 ilaa 24). Waa in aad la xiriirto qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee degmadaada si ay kuu caawiyaan.
FADLAN TAXADDAR YEELO HADDII AADAN HELIN CAAWIMAAD MAXKAMADEED
Kirada Maxkamadda, Dacwada Xal-raadinta Kireystaha Minnesota, iyo Dacwooyinka Kireystaha ee Degdegga ah waa waxyaabo lagu aamin qabo oo loo isticmaali karo maxkamadaha si kireeyaha loogu qasbo in uu sameeyo dayactirka. Waxaa jira waxyaabo kale oo aad sameyn karto oo aan badanaa sharci ahaan ammaan ahayn. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah kirada oo la haysto iyo "dayactirka in laga goosto."
Haysashada kiradaada si loogu qasbo kireeyaha inuu guriga dayactiro waa sharci, laakiin inta badan waa fikrad xun. Haddii aad sidaas sameyso, waa inaad kireeyaha siiso ogeysiis qoran oo ku saabsan dayactirka loo baahan yahay iyo wakhti xaddidan oo macquul ah oo lagu hagaajin karo. Kirada aad ka haysto oo dhan meel dhig. Ha isticmaalin lacagta kirada ama guriga ayaa lagaa saari karaa. La hadal qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga ka hor intaadan kirada iska haysan.
Waxba ha u isticmaalin lacagta kirada ee aad reebato sabab kasta oo ay noqoto!
Haddii aad kirada haysato, kireeyuhu waxa uu sameyn doonaa dacwad ah ka-saaridda guriga (ama "hayasho sharci-darro ah") oo adiga kaa dhan ah maxkamadda. Waxaa laga yaabaa inaad ku bixiso lacagta kirada ee aad hayso maxkamadda wakhtiga dacwad-dhageysiga (lacag ahaan ama jeeg la isku hubo). Haddii maxkamaddu amarto in la bixiyo kirada laga hayo adigoo aan hayn, hadalka aad isku difaacayso lama dhageysanayo oo guriga ayaa lagaa saarayaa.
Haddii kireeyuhu kugu dacweeyo in guriga lagaa saaro:
Aad maxkamadda oo ha ka daahin ballanta.
U sheeg garsooraha in aadan ku qanacsaneyn cabashada kireeyaha iyo inaad rabto go'aan maxkamadeed. Waxaad xaq u leedahay garsoore ama xeerbeegti. Waxaa jira lacag lagu bixiyo maxkamadeynta xeerbeegtida, laakiin lacataas waa laga dhaafi karaa (laguu cudurdaari karaa) haddii maxkamaddu hubiso in aadan awoodin.
Maxkamadda ugu sheeg garsooraha dhibaatooyinka dayactirka. Tus garsoorka sawirradaada iyo amarrada kormeerka oo markhaatiyaashaadu ha u sheegaan waxa ay ogyihiin.
Garsooruhu waxa uu sameyn karaa dhowr waxyaalood:
Waxaa lagugu amri karaa inaad kirada u dhiibto maxkamadda ama kireeyaha guriga ilaa iyo inta runta laga ogaanayo dhinaca kireeyaha
Waxaa la amri karaa om kiradaada la yareeyo haddii uusan gurigu u qalmin kirada oo buuxda
Waxaa lagugu amri karaa in aad kirada keento maxkamadda si aad u hubsato ilaa kireeyuhu ka sameeyo dayactirka guriga ee loo baahan yahay iyo/ama
Waxa lagugu amri karaa in aad kirada qaarked ama gebi ahaan siiso kireeyaha. Garsooruhu wuxuu fahmi karaa in aysan wax dhibaato ah ka jirin guriga. Markaas waa in aad bixiso kirada lagugu leeyahay oo ay la socoto kharashka maxkamadda oo buuxa si looga fogaado in guriga lagaa saaro. Waxaa muhiim ah in aad taxaddar u isticmaasho kirada aad hayso.
Haddii aad haysato kirada, hubso in aad haysato caddaymo badan oo aad tusi karto maxkamadda.
Mar labaad - ma ahan fikrad fiican in aad kirada iska haysato si aad ugu khasabto kireeyaha in uu guriga dayactiro. Sharci ahaan waxaa fiican in kirada makamadda la keeno ama mid ka mid ah xalka kale ee kor ku qoran.
Xaq toos uma lihid in aad "dayactirka iyo goosashada" kirada oo laga reebto kharashka dayactirka. Haddii aad adigu dayactir sameyso adiga oo aan ogolaansho qoraal ah ka helin kireeyaha waa inaad haysato kharashka. Waxaad sidoo kale wajihi kartaa dacwad-dhageysi ah guriga in lagaa saaro haddii aadan bixineyn kirada oo dhan. Guud ahaan marna ma ahan fikrad fiican isticmaalidda "dayactirka iyo goosashada." Waxaa jira waxyaabo laga reebo. Magaalooyinka St. Paul iyo Duluth waxay leeyihiin sharci "dayactir iyo goosasho" ah dhibaatooyin ah kuleyliyaha. Duluth waxay kale oo ay leedahay sharciga "dayactirka iyo goosashada" biyaha, korontada, gaaska, musqulaha jaban, albaabbada iyo dabsheegaha. Minneapolis, St. Paul iyo Duluth waxay leeyihiin sharciyo ah "lacagta bixi oo gooso" oo la isticmaali karo marka kireeyuhu bixin waayo kharashka guriga ooo ah masuuliyadda kireeyaha. Haddii kireeyuhu sameeyo dayactirka ama lacagta in laga goosto kirada, heshiiskaas waa inuu ahaado qoraal oo uu u saxiixo kireeyuhu.
Kirada xaqdarrada ah waa markaad dib la isugu celiyo lacag kiro ah meel dayactirkeedu xun yahay marka loo eego sharciga guryaha ee deegaanka. Kirada la soo celiyo qeyb ahaan waa kirada makamadeed, Dacwooyinka Xalraadinta Kireystaha Minnesota iyo Dacwooyinka Degdegga ah ee Xalraadinta Kireystaha. Haddii kireeyuhu guriga sameeyo oo aan lagugu siin qiimo-dhimis ah kirada markay jirto mid ka mid ah dacwado maxkamadeed, waxaad dacwad ka furan kartaa Maxkamadda Degmada ama Maxkamadda Dhexdhexaadinta. Waxaa jirta lacag lagu xareeyo markaad bilaabeyso kiiska maxkamadda, laakiin maxkamaddu ayaa kaa dhaafi karta (kuu cudurdaareysa) haddii aadan awoodin. Xoghaynta maxkamadda ka codso waraaqaha lagaaga dhaafayo lacagta.
Waa inaad maxkamadda ka codsato in laguu soo celiyo qeyb ka mid ah lacagta kirada wakhtigii aad ku noolayd ee uu gurigu burbursanaa. Dacwadda soo celinta kirada waa in la sameeyo ka dib marka dayactirka la sameeyo, si aad garsooruhu u ogaado muddadii aad guriga ku noolayd dhibaatooyinkii dayactirka. Garsooruhu wuxuu ku amri karaa kireeyaha in uu soo celiyo qeyb ka mid ah kiradii aad bixisay wakhtigaas ay jireen dhibaatooyinka dayactirka oo qiimaha gurigu waa uu hooseeyey.
Tusaale ahaan, aan dhahno waxaad bixisaa kiro ah $600 bishii, laakiin waxaa jira daaqado jajaban iyo musqul biyaheedu iska socdaan. Waxaad codsan kartaa lacag aad ku hagaajiso musqusha oo lagaa gooyo oo ah $200 kirada bil kasta oo daaqadaha jaban iyo biyaha musqusha oo kugu badiyey kharashka.
Caddeyn ayaa lagama maarmaan ah si aad u muujiso inaad xaq u leedahay in laga gooyo kirada. Inaad ku guuleysato kirada la goynayo, waa in aad 4 arrimood ka cadeysaa maxkamadda:
Kireeyuhu inuu ogaa dayactirka in loo baahan yahay. Tus garsoorka koobbiga warqadda ama warbixintii koowaad ee kormeeridda guriga.
Dayactirka inaan la sameyn. Tus warbixinta labaad ee kormeeridda guriga iyo/ama markhaati ah dad arkay xaaladda xun, iyo/ama sawirro aad ka qaadday.
Muddo intee in le'eg ayaad sugeysay adeeg ama dayactir aad u baahneyd. Isticmaal sawirro, markhaatiyaal, waraaqo iyo dukumentiyo kale oo kuu ah caddeyn.
Immisa lacag ayaa kugu baxay, ama "waxyeello". Caddadka lacagta aad codsaneyso waa in ay macn ahaan dhibaatadii la mid tahay.
Tusaale ahaan, guri hal qol ah ayaa lagu kireeyey $50 wax ka yar guri kale oo ah laba qol oo ay isku dhisme ku wada yaallaan. Ma aadan isticmaalin qolka jiifka ah ee labaad oo waxaan ku jirin daaqadaha dabeylaha duufaanka ah. Sidaa darteed, waa inaad hesho $50 bishiiba daaqadaha awgood, oo waxa uu xaalku la mid yahay in uu gurigu ahaa hal qol oo jiif ah oo keliya.
Xusuusnow – kireeyuhu kaama aargoosan karo dacwada awgeed oo waxa uu ficilkaagu ahaa xuquuq kirayste oo sax ah.
Kireeyhu ma kireysan karo guri aan ku habbooneyn in ay dad ku noolaadaan. Kireeyuhu kuma qaadan karo kiro ama curaar guri sharci ahaan loo xiray ama la soo caddeeyey "inuusan u qalmin in ay dad ku noolaadaan." Haddii guriga aad ku nooshahay la xiro, la xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee degmadaada si aad uga hesho talo ah xuquuqdaada.
Waxaa jira 2 nooc oo xiritaan ah. Nooca ugu badan waa marka ay Kormeereyaasha Guryaha ee Waaxda Caafimaadka guriga ka helaan xadgudubyo ah sharciga badqabidda oo khatar gelin kara kireystaha. Nooca kale ee xiridda waa marka ay hay'ad dawladeed iibsato dhulka guriga ujeeddo gaar ahaaneed oo dadweyne, sida in la dhisayo jidweyne.
Marka guri aad kireysato la xiro, sabab kasta oo ay tahay, waa in aad ka guurto taariikhda ku xusan amarka xiridda. Wakhtiga la isu siiyo in looga guuro waxay ku xiran tahay sababta dhismaha loo xirayo. Haddii aadan ka guurin wakhtiga kama-dambeysta ah, booliiska ayaa khasab kaaga rari kara. Haddii ay sidaas dhacdo, carruurtaada waxaa loo geynayaa ururka daryeelka carruurta oo alaabtaadana guriga ayaa looga tagi donaa.
Haddii guriga lagugu dul xiro xadgudubyo sharci ah awgood waa in aad la xiriirto qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee degmadaada si aad u hesho caawimaad. Guud ahaan waa in aad sidaas ogaato:
Uma baahnid in aad bixiso kiro ama curaar.
Waxaa laga yaabaa inaad hesho Caawimaad Degdeg ah si aad guriga uga guurto. U sheeg shaqaalaha degmadaada in aad uga baahan tahay ballan degdeg ah sababtoo ah guri aad ku nooshahay ayaa la xiray.
Hayso caddeymaha xaaladaha guriga. Iska eeg guriga gudihiisa oo qoro dhibaatooyinka dayactirka. Koobbi ka qaado warbixin kasta oo ah kormeerid. Sawirro ka qaado. Hubso in aad haysato caddeyn kasta markaad guureysid. Caddeyntu waxa ay ku caawin doontaa goor dambe haddii aad u baahato in aad dacwad maxkamadeed ku caddeyso xaalado xun, iyo/ama in aad u isticmaasho warbixinta baarista kireystaha.
Waxaad xaq u leedahay in aad kireeyaha ku dacweyso Maxkamadda Heshiisiinta kiradii oo dhan sababtoo ah guriga oo xirnaa ama ku dhawaa xaalad lagu xiro. Xaqiiqadii, kireeyaha ayaa mas'uul ka ah in uu soo celiyo gebi ahaan lacagtii kuugu baxay inaad ku noolaato meel kale, iyo sidoo kale 3 jibaar lacagtii lagaa qaaday wixii ka dambeeyay taariikhda gurigaas la xiray. Khasaaraha dhabta ah waxaa ka mid ah kharashyada aad ku bixisay si aad u daboosho guuritaanka iyo hoy ku meel gaar ah. Ka hor intaadan xareyn dacwad ah magdhow lacageed, kala hadal qareen. Waa muhiim in la hubsado in qaansheegadlka lacagta oo dhan laga wada dhigo hal dacwad.
Kireeyaha guriga waa in ku soo celiyo curaartaada, iyo dulsaar, 5 maalmood gudahood ka dib markaad guurto. Kireeyaha u qor cinwaan lagaala soo xiriiri karo.
Isla markiiba ka guur sababtoo ah guri la xiray waa sharci darro in lagu noolaado. Waa lagu xiri karaa oo carruurtaada waxaa loo dhiibi karaa ururka ilaaliya ilmaha.
Haddii guriga loo xiro dan guud oo ah mid dadweyne
Waxaad heli kartaa lacag ah dib-u-dejin si ay kaaga caawiso kharashaadka guurista mar kasta oo ay dowladdu guri u xirto dan guud.
Dawladdu ayaa kaa caawineysa in aad hesho guri kugu habboon oo ah isla kiradii aad bixin jirtay.
Haddii aad dhibaato ku qabto meelmarinta xuquuqdaada ama helidda magdhow, la xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga si ay kuu caawiyaan.
Sunta u daran maskaxda dadka ama ledh waxa ay keeni kartaa dhibaato caafimaad. Adiga ama xubnaha qoyskaaga ayaa ku sumoobi kara sunta ledhka oo ku jira
rinjiyadii hore ee guryaha
ledhku waxay soo raaci kartaa biyaha tuubbada iyo
cuntooyinka ama dareerayaasha marssan dheri ku dhalaalaya macdan ama waasgada.
Waxaa jira sharci ah federaal oo lagu ilaaliyo kireysteyaasha in ay meelo caam ah suntaas ka soo gaarto– sida rinjigii hore ee guryaha. Sharcigan wuxuu khuseeyaa gebi ahaan guryiihii la dhisay 1978 iyo ka hor marka laga reebo guryaha qaarkood ee waayeelka; guriyaha dadka naafada ah (haddii ilmuhu ka yar yihiin 6 sano oo ku nool ama u deggen halkaas) iyo guri kasta oo "aan qol jiif ah lahayn" sida guri qol ah, qolalka jiifka ardeyda iyo guryaha kirada qolqolka ah. Sharcigan looma adeegsan karo guryaha uusan rinjigoodu ku jirin wax ledh ah.
Haddii sharcigan khuseeyo guri aad rabto in aad kireysato, kireeyuhu waa in uu
ku siiyo buug yar oo ku saabsan halista sunta ledhka. Buug-yaruhu waa in uu ay soo xaqiijiso Hay'adda Ilaalinta Deegaanka.
kuu sheegi karo wixii rinji ah ee ay ku jirto ledh ama sunta halista ah ee rinjiga la marin jiray guryaha iyo
ku siiyo wixii diiwaan ama warbixin ah oo kireeyuhu ka hayo rinjiga leedhka ku jira iyo khataraha rinjiga leedhka ku jira ee guriga.
Waxaad xaq u leedahay in aad iska eegto macluumaadka intaadan kireysan guriga.
Haddii aad go'aansato in aad kireysato guriga, heshiiska kirada waa in uu ku jiro
qoraal digniin gaar ah oo ku saabsan ledhka
sheegidda kireeyaha ee rinji ledh lagu ogyahay iyo khataraha ku saleysan rinjiga ledhka
ku siiyo wixii diiwaan ama warbixin ah oo kireeyuhu ka hayo oo uu kaa siiyo rinjiga ledhka ku jira iyo khataraha rinjiga ledhka ku jira ee guriga
qoraal aad ku aragto buug-yareha oo ku saabsan halista ledhka, kireeyaha oo kuu sheega, iyo liis ah warbixin iyo diiwaan
qirasho gaar ahaaneed oo ka socota wakiilka kireynta (haddii uu jiro)
saxiixa kireeyaha guriga, wakiilka kirada iyo adiga.
Tusaale ah "Bixinta macluumaad ku saabsan ranjiga Ledh Rinji ku jira iyo/ama Khataraha Rinjiga Ledh Leh" ka eego bogga 58.
Haddii kireeyuhu raaci waayo sharciga, heshiisku waa kuu shaqeynayaa. Si kastaba ha ahaatee, kireeyuhu wuxuu muteysan karaa ciqaab, sida ganaax, magdhow, iyo xabsi haddii uusan u hoggaansamin sharcigan.
Ledhku waxay sababi kartaa dhibaato ah waxbarashada ah iyo khalkhal dabeecadeed:
dhaawac maskaxeed oo joogto ah (oo keenaya, waxyaabo ay ka mid yihiin, indho-la'aan, curyaannimo ama cillad maskaxeed)
dhaawac ah kelyaha iyo unugyada dhiigga iyo
Ledhku waxaa laga heli karaa rinjiga ama darbiga, boorka rinjiga, carrada, iyo mararka qaarkood biyaha tuubbada. Meelaha ugu badan ee laga helo ledhka waa guryihii ama dabaqyada hore, guryo ku dhex yaal magaalada gudaheeda, iyo carrada aan daboolnayn ee uu galo qiiqa baabuurta. Carruurta iyo haweenka uurka leh ayaa ku jira halista ugu badan ee ledhka. Ledhka waxa uu u gudbi karaa dhiigga ilmaha haddii ay ku neefsadaan siigada midabka leh ama carrada muddo gaaban, ama ay cunaan xataa in yar oo ah rinjiga soo fuqa ama ciidda ledhka leh.
Carruurta oo dhan waa in si joogto ah looga baaro ledhka oo qeyb ka ah baarista joogtada ah ee wiisitada dhakhtarka. Baaris ah dhiigga oo fudud ayaa muujin karta heerarka ledhka ku jira dhiigga. Baarista waa in loo sameeyo sida soo socota
Carruurta ka yar 24 bilood– 6-dii biloodba mar
Carruurta da'doodu tahay 2 ilaa 6 sano– hal mar sannad kasta
Haweenka uurka leh– si joogto ah inta uurku jiro oo dhan
Carruurta oo dhan– isla marka uu gurigu leeyahay daaqado boor ah ama haddii rinjigu ka soo fuqayo daaqadaha daaqadaha, dhinacyada, saqafka, ama darbiyada, sagxadaha ama alwaaxda.
Haddii aad haysato kaarka caafimaadka gobolka ee Medical Assistance, kharashka baarista waxaa idinka bixinaya barnaamijka EPSDT.
Waaxda caafimaadka ee gobolka ama degmada ayaa hubiya ledhka mar kasta haddii ilma ka yar 6 jir ama haweenka uur leh laga heli karo ledh dhiiggooda. Waxay ka baaraan guriga iyo dhammaan meelaha la wadaago ee dhismeyaasha dabaqyada ah. Waxay sidoo kale baaraan goob kasta oo kale oo ilmuhu wakhti badan soo joogo. Waaxda Caafimaadka waa in ay baarto 5 maalmood gudahood ka dib marka loo sheego heerarka ledhka ee badan.
Guryaha In Laga Ilaaliyo “Sunta Ledhka”
Haddii ay Waaxda Caafimaadka hesho ledhsa, kireeyaha waa in uu guriga "ledhka ka baabbi'iyo". Kireeyaha guriga waxaa lagu amrayaa in uu taariikh cayiman (badanaa 2 ilaa 4 toddobaad) uga saaro ama ka daboolo meesha ay ledhku ka imaaneyso. Arrintan mar kasta waa masuuliyadda kireeyaha, ee ma aha kireystaha. Qofka ka socda waaxda caafimaadka waa in uu sheego haddii guriga laga guuriyo inta guriga laga nadiifinayo. Waxa uu qofkaasi sidoo kale ka jawaabi karaa su'aal kasta oo aad ka qabto oo ah sida ay caafimaadka u saameyn doono mar haddii gurigu yahay "ledh la'aan" Qiiqa iyo boorka ka soo baxa rinjiga ledhka wuxuu khatar ah ku yahay carruurta iyo haweenka uurka leh.
Haddii aad go'aansato in aad ka baxdo guriga inta la nadiifinayo, waxaad ka noqon kartaa heshiiska kirada. Haddii aad guurto, kireeyuhu waa in uu ku soo celiyo curaarta 5 maalmood gudahood oo lagu daray kiro kasta oo aad horay u bixisay. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay in aad ka guurto muddo ka yar ka dib. Kireeyuhu waa in uu kaa oggolaado in aad dib ugu soo guurto marka la nadaafiyo guriga. Khasab kuguma aha in aad kirada ka bixiso intaad ka maqan tahay guriga. Haddii aad u baahan tahay lacag aad ku guurto ama guri ku meel gaar ah, ka codso waaxda caafimaadka haddii aad caawimaad ka heli karto.
Ka hor intaadan dib ugu laaban guriga, hubso in uu kormeeraha caafimaadka ku soo noqday oo uu hubiyey. Sidoo kale hubso in uu kireeyuhu si taxaddar leh u nadiifiyo guriga marka laga shaqeeyo ka dib.
Dib ha ugu laaban guriga ilaa uu kireeyuhu nadiifiyo oo si fiican looga shaqeeyo.
Haddii kireeyuhu uusan guriga ka nadiifin rinjiga ledhka, waxaad sameyn kartaa dacwooyinka sharciga ee ku qoran bogagga 23 ilaa 27 ee buug-yarehan. Haddii adiga ama carruurtaadu waxyeello idinka soo gaarto ledh, waxa kale oo laga yaabaa inaad lacag ku sheegatid kireeyaha. Waxaa laga yaabaa in aad sameyn karto 1 dacwo maxkamadeed oo keliya oo ka dhan ah kireeyaha. Raadso qareen marka hore si aad u hubisato qeybaha dacwaddaada oo dhan, sida waxyeellada ledhka iyo yareynta kirada (qeyb ahaan soo-celin ah kirada), waa inay ku jiraan dacwad kasta oo aad bilowdo.
Waxaad xaq u leedahay in aad weydiisato dayactirka guriga, u yeero kormeere, soo dirso dacwo ah kiro maxkamadeed, oo ka dalbo kireeyaha in uu ixtiraamo xuquuqdaada gaarka ah. Waxyaabahaas, iyo kuwo kale, ayaa ah xuquuqdaada sharciga ah ee kireyste ahaaneed ee Minnesota. Kireeyuhu kaama aargoosan karo (oo wax aargoosi ah kuguma sameyn karo), oo kuma dhihi karo ka bax guriga, ama kaama yareyn karo adeegyada guriga ka dib marka aad u istaagto xuquuqdaada sharciga ah ee kireyste ahaan. Weli waa in aad bixiso kirada wakhtigaa lagaa sugayo.
Maxkamaddu wediineysaa su'aalo ku saabsan haddii kireeyuhu kaaga aargoosanayo haddii kiiska lagaaga saarayo guriga ama aad hesho ogeysiiska guuritaanku 90 maalmood gudahood markaad dacwo ah xuquuqdaada sharciga ah ee kirayste. Waa in aad u sheegtaa garsooraha waxa aad sameysay ee aad u adeegsatay xuquuqdaada. Hadday uu aargoosi dhaco 90 maalmood gudahood, garsooruhu waxa uu u qaadanayaa in kireeyuhu aargudanayo haddii uusan kireeyuhu muujin karin sabab sax ah oo guriga lagaaga saarayo. Garsooraha ayaa diidi doona in lagaa saaro guriga haddii uusan kireeyuhu muujin karin sabab macquul ah. 90 maalmood ka dib waa inaad caddeyso in uu mulkiiluhu isku dayey in uu kaa guuleysanayo haddii aad la aaddo maxkamad.
Weydiiso maxkamadda in ay kuu bilowdo tirinta 90 maalmood laga soo bilaabo markii uu kireeyaha guriga sameeyo ama dayactiro wax kasta oo uu garsoore ku amray, sida hagaajinta oo dhan, waxaad isku difaaci kartaa caddeyn ah in uu aargoosi jiro.
Haddii uu kireeyuhu isku dayo in uu kaa saaro guriga, kirada oo aad bixin weyday awgeed, waa difaac ah in aad muujiso in kireeyuhu kirada kugu badiyey si uu kaaga aargoosto si sharci darro ah. Si aad u adkeyso difaacaaga, waa inaad lacagtii hore ee kirada geyso maxkamadda.
Waxaa jira dhowr qaab oo loo beddelI karo ama loo joojin karo heshiiska kirada. Waxay ku xiran tahay heshiis kirada oo go'an ama mid ah xilliyeed (eeg bogga 10 oo aad ka heleyso faahfaahin). Haddii aad adiga iyo kireeyaha isku raacdaan inaad beddeshaan ama joojisaan heshiiska, sidaas ayaa kuugu filan inaad sameysaan bedelaad ama joojinta heshiiska. Arrintan waxay ku fiican tahay heshiis kiro oo ah afka ama qoraal, heshiis go'an ama heshiis xilliyeed. Laakiin sidaas waa ay ka duwan haddii aad ku haysato shahaadada Section 8.
Iska hubso in aad hesho heshiiska oo ah qoraal. Haddii aadan heshiiska ku helin si ah qoraal, "waxaan iri, waxaad tiri" dood ah ayaa idiin bilaabaneysa in ay soo ifbaxdo goor dambe. Waxaa ku qaban kara shuruudihii hore ee heshiiska kirada, sida bixinta kirada lagugu leeyahay oo dhan.
Haddii aad jebiso kirada adigoon jebin heshiiska kireeyaha, kireeyuhu wuxuu kaa rabaa in aad bixiso kirada muddada heshiiska oo dhan haddii kireeyuhu waayo qof kale oo uu dib uga sii kireeyo guriga. Kireeyaha waajib kuma aha helidda qof kale oo ah kireyste ku beddela.
Ma jirto xuquuq toos ah oo lagu jebin karo heshiiska kirada. Kireystaha noqda dhibbane ay ku dhacday tacaddiyada qoyska guihiisa iyo kireystaha dhinta inta lagu jiro xilliga kirada waxaa laga yaabaa inay soo afjaraan heshiiska kirada goor hore iyadoon oggolaansho laga helin kireeyaha. Haddii kale, ma jirto hab toos ah oo lagu jebin karo heshiiska kirada. Kireeyuhu uma baahna afjaridda heshiiska haddii ay kugu dhacdo shaqo la'aan. Sidoo kale uma baahna in uu afjaro kirada haddii aad guri iibsaneyso ama haddii shaqa ahaan laguu wareejiyo Gobol kale. Haddii aad guri iibsaneyso ama laguu wareejin karo shaqo meel kale waa in lagu daro oraah kale heshiiska si laguugu oggolaado in aad jabiso heshiiska sababahaas awgood.
Sharci ahaan waad jebin kartaa heshiiska haddii aad tahay dhibbane tacaddiyada qoyska gudihiisa, faraxumeyn galmo, ama dabagalid, balse aad sameyso 2 wax
1. Sii kireeyaha
Koobbi ah Amarka Maxkamadeed oo ah Ilaalinta ama Xakamaynta Dhibaato jirta iyo
Warqad saxiixan oo taariikhaysan (eeg bogga 65) oo sheegaya
in aad ka baqeyso tacaddi kaaga yimaada qofka ku magacaaban amarka maxkamadeed
in aad u baahan tahay in aad heshiiska jebiso
taariikhda aad ka bixi doontid iyo
maxaad ka rabtaa kireeyaha in uu ku sameeyo alaabtaada.
2. Inaad bixiso kirada bisha aad guureyso.
Waxaad sidoo kale waayi doontaa curaartaadii. Kireeyaha ayaa haysanaya curaarta si uu kuugu oggolaado in aad heshiiska jebiso.
Haddii aadan haysan (ama aadan rabin inaad hesho) Amar Maxkamadeed oo ah Ilaalinta ama Xakameynta Dhibaatooyinka, waxaad xaq u leedahay inaad soo bandhigto dukumiinti (eeg bogga 67) mid kasta oo ka mid ah oo muujinaya inaad tahay dhibbane tacaddiyo qoys gudihiis, faraxumeyn galmo, ama dabagalid ay ogyihiin
xirfadle daryeel caafimaad oo shati haysta
qof u dooda tacaddiyada qoyska gudihiisa, ama
la-taliyaha faraxumeynta galmada.
Haddii aad su'aalo qabto, la xiriir xafiiska adeegyada sharciga, qof u dooda tacaddiyada qoyska gudihiisa, ama la-taliyaha faraxumeynta galmada. Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg xaashida xogta xaqiiqda ee H-23 Dhibbanaha Tacaddiyada Qoyska Gudihiisa, Dabagalidda, ama Dambiyada Waaweyn: Xuquuqda lagu Jebiyo Heshiiska Kirada.
Guud ahaan, heshiiska kirada ee muddada go'an lama beddeli karo ama lama soo afjari karo ilaa taariikhda uu ku egyahay heshiiska ilaa aad adiga iyo kireeyaha si kale u heshiisaan mooyee.
Akhriso heshiiska kirada. Badanaa, ogeysiis looma baahna si loo soo afjaro heshiiska muddada go'an haddii aad rabto inaad joojiso taariikhda ku qoran heshiiska. Laakiin heshiisyada go'an ayaa adiga ama kireeyaha ku soo afjari kartaan heshiiska adinkoo bixinaya ogeysiis ah 30 ama 60 maalmood. Haddii heshiisku leeyahay wakhti ogeysiis go'an, waa in uu ugu yaraan isku mid idiin ahaado adiga iyo kireeyaha.
Qaar ka mid ah heshiisyada muddada go'an ayaa wata dibu-cusbooneysiin toos ah. Taas macnaheedu waa haddii aadan waxba ku oran kireeyaha, heshiiska si toos ah ayaa loo cusbooneysiin doonaa (eeg bogga 10). Qodobbada cusboonaysiinta oo keliya ayaa sharci ah haddii kireeyuhu uusan waraaq u soo dirin kireystaha ah cusboonaysiinta. Waraaqda waa in la soo diro ugu yaraan 15 maalmood, laakiin waa inaysan ka badnaan 30 maalmood, ka hor taariikhda ay tahay inaad bixiso ogeysiis ku saabsan qorshegaaga guuritaanka. Waraaqdu waa in lagu sheego in heshiiska la cusbooneysiin doono ilaa aad u soo dirto warqad aad ku sheegeyso inaadan rabin in aad cusboonaysiisato oo aad guureyso.
In la beddelo ama la soo afjaro kirada xilliyada, sida kiro ah bil-bil, adiga ama kireeyaha waa inaad sida saxa ah isa siisaan ogeysiis qoraal ah. Ogeysiiska waa in la bixiyo 11:59 saqda dhexe ee maalinta ka horreysa maalinta kirada. Kirada xilliga ah, muddadeeda kirada waxay bilaabaneysaa maalinta la bixinayo kirada socota ilaa kirada laga bixinayo kirada xigta. Haddii kirada la iska rabo bilowga bisha, muddada kirada waxay soconeysaa bilaabga ilaa dhammaadka bisha.
Tusaale ahaan, aan dhahno kiradaadu waa bil-bil lacagta la iska rabo kowdo bisha. Waxaad rabtaa inaad guurto bisha 1-da Feberaayo. Waa inaad kireeyaha qoraal ahaan ku ogeysiiso inaad rabto inaad guurto 31-ka Disember ka hor 11:59 pm. Si waraaqda loogu tixgelin karo "ogeysiis sax ah", waraaqadu waa in ay ku qoran tahay taariikhda aad ka guureyso.
Haddii aad rabto inaad guurto laakiin aadan bixin ogeysiiska saxda ah, kireeyuhu wuxuu kugula xisaabtami karaa bil dheeraad ah in kasta oo aad guureyso ka hor inta aysan bilaaban bisha kale.
Haddii kireeyuhu rabo inaad guurto laakiin uusan ku siin ogeysiis sax ah, waad joogi kartaa aqalkaaga (haddii aad kirada bixiso) ilaa kireeyuhu ku siiyo ogeysiis kale.
Xusuusnow, kiradu waa heshiis sharci ah!
Ha jebin heshiiska adigoon si taxaddar leh uga fiirsan waxyaabaha aad sameyn karto. Haddii ay tahay inaad jebiso heshiiska, siyaabaha kuugu wanaagsan waa
Heshiis wada gaara kireeyaha (deegaanka qaarkood waxay leeyihiin adeegyo dhexdhexaadin ah oo caawimaad laga heli karo)
Weydii haddii kireeyuhu heli karo kireyste cusub
Markaad ka guureyso guri, mar kasta u sheeg milkiilaha guriga in aad guurtay, xataa haddii aadan bixin ogeysiiska "saxda ah". Kireystayaasha waa inay siiyaan kireeyaha ugu yaraan 3 maalmood oo ah ogeysiis ka hor inta aysan guurin inta u dhaceysa Nofeembar 15 iyo Abriil 15. Kireystaha aan bixin ogeysiiskaas 3-da maalmood ah waxaa lagu heli karaa dambi uu heer hooseeyo. Sababta sharcigan ayaa ah in ay tuubooyinku waxyeello ka gaareyso oo ay barafoobaan xilliga qabowga haddii aan gurigu lagu nooleyn oo laga damiyo kuleyliyaha.
Heshiisyada qaarkood waxaa jebiya waxa loogu yeero "kala-bixid fudud labada dhinac." Arrintan sida ay dhici karto waa ugu yaraan 2 hab
haddii furaha u celiyo kireeyaha oo uu qaato asaga oo aan sheegan wax kiro ah in ay ka maqan tahay ama
haddii kireeyuhu qof kale ka sii kireysto guriga isaga oo aan kiresyaha u sheegin. Xaaladahaas oo kale, maxkamaddu waxay xukumi kartaa in kireeyuhu la wareegay masuuliyadda guriga oo aan qof kale loo qabsan karin masuuliyadda heshiiska kirada.
Haddii kireeyuhu qaato lacag kiro ah taariikhda uu sheegay in guriga laga guuro, ogeysiiska looga baxayo guriga waxa uu noqon karaa mid si sharci ah looga noqday. Arrintaas waxay noqneysaa cusbooneysiinta heshiiska kirada. Kala hadal qareen ka hor intaadan u maleyn in aqbalaadda kirada ay nasaqeyso ogeysiiska.
Haddii ay dhici karto iyo goorta kireeyuhu kordhin karo kirada waxay ku xiran tahay nooca kirada la haysto.
Heshiiska Muddada Go'an
Kirada muddada go'an waa mid caadi ahaan lagu jiro muddada la saxiixo oo dhan. Heshiiska qoran wuxuu qornaan kara sida iyo goorta la kordhinayo kirada, haddii la isku af garto. Haddii aysan waxba ugu jirin heshiiska kirada in la kordhinayo, waa in lagu sheego qoraal ahaan marka la saxiixayo heshiiska in aysan dhacayn kiro la kordhinayo muddada heshiiska.
Haddii aad ku jirto heshiis kiro ah mid xilliyeed, sida kireysi bil-bil ah, kireeyaha ayaa ku kordhin kara kirada intii uu rabo, had iyo jeer sidii ay rabaan. Kama jirto xakameyn ah kirada Minnesota wixii aan ka ahayn guryaha ay dowladdu leedahay ama ay kabto. Laakiin, waxaa jira waxyaabo uu kireeyuhu guriga ka sameyn karo ka hor intaan kirada la kordhin.
Waa in kireeyaha laga helo ogeysiis ka hor intaan kirada la kordhin. Arrinaas macnaheedu waa in la kala helo ogeysiis qoraal ah ugu dambeyn 11:59 saqda dhexe ee maalinta ka horreysa xilliga ay kirada xigta billaabaneyso. Kordhinta kiradu ma dhaqan galeyso ilaa muddada labaad ee kirada ee ku xigta ogeysiiska, haddii uusan ogeysiisku sheegeyn wakhtiga la dhaqan galinayo ee xilliga dambe. Marka ay kiradu tahay bil-bil oo kirada la iska rabo bil kasta maalinta ugu horreysa, ogeysiiska qoran ee la bixiyo Diseembar ma noqon karo mid sharci ah ilaa Feberaayo.
Waxaa la diidi karaa kororka kirada oo kala ah 3 xaaladood sida hoos ku qoran
Kireeyaha marka uu kordhiyo kirada si uu kireytaha uga aargoosto ka dib marka kireystuhu xuquuqdiisa doonto (eeg bogga 32)
Kireeyuhu in uu kor u qaado kirada si uu kireystaha ugu sameeyo takoorid, ama
Kireeyuhu in uu bixiyo ogeysiis aan sax aheyn.
Haddii ay dhacdo mid ka mid ah xaaladahaan, waa inaan la bixin kirada la kordhiyey. Sidoo kale, haddii aad u malaynaysid in kirada lagugu badiyey takoorid awgeed, la xiriir Waaxda Xuquuqda Aadanaha ee Minnesota ama waaxda xuquuqda madaniga ah ee deegaankaaga si aad wixii cabasho ah ugu gudbiso.
Xusuusnow, haddii aadan bixin kirada la kordhiyay, kireeyuhu waxa uu kugu dacweyn karaa in guriga lagaa saaro. Laakiin kireeyuhu kaama saari karo guriga iyadoo aysan jirin dacwad maxkamadeed oo ah in guriga la iska saaro. Haddii kireetuhu kula tago maxkamad, u sheeg garsooraha in uu jiro ogeysiis aan sax ahayn ama takoorid ama aargoosi. Taxaddar yeelo. Haddii garsooruhu go'aansado in kireeyuhu uusan sameyn wixii aad ku sheegatay, waa in aad bixiso kirada lagugu kordhiyey iyo kharashaadka maxkamadda. Haddii aad bixin weydo, guriga waa lagaa saarayaa.
Guryaha Dowladda Iyo Kuwa Ay Kabto
Bogga 53 ka eego macluumaad dheeraad ah.
Haddii guriga la iibiyo, kireeyaha cusub waa in uu raaco xeerarka kiradaada ee hadda jira haddii aysan heshiiska kiradaada wax kale ku qorneyn. Kireeyaha cusub waa in uu raacaa shuruudahii hore ilaa iyo inta heshiiskaagu ka dhammaanayo. Haddii heshiisku yahay mid ah xilli, waxaad ku khasbi kartaa kireeyaha cusub waa in uu ku siiyo ogeysiis sax ah ka hor intaadan beddelin ama joojin heshiiska kirada.
Beddelka Dhismaha Guryaha
Haddii dhismaha guriga loo beddelo guryo isku haya garbaha difaacid gaar ah ayaad ku leedahay, sida
Waa in aad hesho ogeysiiska beddelaadda ugu yaraan 120 maalmood ka hor intaadan guurin. Haddii heshiiskaaga kirada uu dhaafo muddada ogaysiiska oo ah 120 maalmood, waxaad xaq u leedahay in aad joogtid ilaa inta heshiiskaagu ka dhammaanayo.
Guriga ay ku leeyihiin ugu yaraan 1 qof oo ah 62 sano ama ka sii weyn, naafo ah, ama ilmo yar, waxa ay codsan karaan 60 maalmood oo dheeraad ah si ay uga guuraan. Waa in codsigu yahay mid ah qoraal lagu rabo wakhti dheer 30 maalmood gudahood ka dib markaad hesho ogeysiiska ah beddelaadda ee kireeyaha.
Waa in aad hesho fursadda koowaad ee aad adigu guriga ku iibsan karto. Ka dib marka uu kireeyuhu boostada ku diro ogeysiiska beddellaadda guriga waxaad haysataa 60 maalmood oo aad ku iibsan karto guriga ka hor inta aysan iibsan dad kale.
Guryaha Xaraashka Ah
Guryaha kirada ah waxaa xaraaha shirkadaha amaahda guryaha. Haddii gurigaaga la xaraashayo, dadka deggan dhismaha waxay shariifka magaalada ka heli doonaan ogeysiis loo yaqaan Ogeysiiska Iibsiga Guryaha Xaraashka ah. Ogeysiiskaas waxaa ku qoran taariikhda xaraashka iibka ah.
Kireeyaha guud ahaan waxa uu haystaa 6 bilood laga bilaabo taariikhda iibinta ee shariifka si uu isugu dayo in uu dib u iibsado dhismaha. Xilligaan waxaa loo yaqaan "xilliga lala wareegi karo." Waad ku sii noolaan kartaa guriga inta lagu jiro xilliga lala wareegi karo balse waa in kirada la sii bixiyo. Haddii heshiiska loo qorsheeyay in uu dhammaado ama kireeyuhu (bangiga laba rabo) ku siiyo ogeysiis inaad guurto inta lagu jiro waqtigan, waa inaad ka guurto. Kireeyaha guriga waa in uu bixiyo biilasha korantada haddii ay ku jiraan heshiiska.
Xaaladaha badankooda, kireystaha waa uu sii joogi karaa guriga la xaraashayo ugu yaraan 90 maalmood ka dib dhammaadka muddada lala wareegi karo. Kireystaha waxa uu xaq u leeyahay qoraal ah 90-maalmood oo ah ogeysiis lagu joojinayo kireysiga oo ogeysiiska lama bixin karo sida uga dhakhso badan dhammaadka muddada lala wareegi karo.
Haddii aad heshiis kula jirto kireeyaha oo uu ku egyahay 90 maalmood ka dib dhammaadka muddada lala wareegi karo, waad sii joogi kartaa guriga ilaa dhammaadka heshiiska. Bangigu waa in uu weli ku siiyo ogeysiis ah 90-maalmood oo lagu joojinayo heshiiska kirada iyo kireysiga taariikhdaas.
Waa in aad bixiso kirada oo ad raacdo shuruudaha heshiiska si aad u sii joogto.
Haddii uu qof iibsado dhisme guryo ah ama guri si uu ugu noolaado, waxa uu qofkaasi xaq u leeyahay in haddii uu rabo goor hore guriga ka saaro. Si kastaba ha ahaatee, mar kasta waa in lagu siiyo ogeysiis ah 90 maalmood.
Haddii bangigu kuu soo diri waayo ogeysiis ah ilaa 90 maalmood, balse uu isku dayo in uu guriga kaa saaro, mar kasta waa inaad hesho qoraalka lagaaga saarayo guriga in laga masaxo diiwaanka maxkamadda. Xuquuqdaas waxay khuseysaa marka la iska saarayo guryo la xaraashayo.
“Kiro-hoosaad” macnaheedu waa in aad qof ka sii kireysato guriga aad adigu kireysatay. Xaq ayaad u leedahay in aad guriga sii kireysato, haddii uusan heshiisku kuu diideyn. Markaad guri sii kireysato adiga ayaa weli masuul ka sii ah wax kasta oo ku dhex qoran heshiiska kirada, xataa haddii aad qof kale ka sii kireyneyso guriga. Haddii aad u maleyneyso in aad guriga sii kireysato mar dambe, si taxaddar leh u aqri heshiiska ka hor intaadan sii kireysan guriga haddii laguu oggol yahay. Heshiisyo badan ayaan kuu oggoleyn in guri la sii kireysato balse qaar ayaa oggolaan kara haddii marka kireeyuhu heshiiska ku qoro.
Mararka qaar guri ayaa lagu arkaa dhibaatooyin badan oo dayactirid ah oo dadku waxay sheegaan in aysan ku sii noolaan karin. Taas oo kale waxaa la yiraahdaa guri-ka-saarid iska muuqata. Guri-ka-saaridda iska muuqata macnaheedu waa in kireeyuhu uu sameyn waayo dhibaato dayactirid ah ama xaalad kale oo jirto oo aad u culus oo guriga looga baxo.
Haddii aad go'aansato inaad jebiso heshiiska adigoo haysta gar ah guri-ka-saarid iska muuqata, kireeyaha waa inaad siiso qoraal ah ogaysiiska dhibaatada. Waraaqdaas waa inaad ku sheegto in uu heshiiskii jebiyey kireeyaha iyo inaad guriga ka guureyso haddii aan dayactirka lagu sameyn wakhti macquul ah. Koobbi ka reebo waraaqdaas. Haddii uu jiro kormeere jooga deegaankaaga, la xiriir oo weydiiso in kormeer laguugu sameeyo guriga. Ka reebo koobbi ah amarrada dayactirka si aad ugu caddeyso xaalka guriga. Sidoo kale waxaa fiican in laga codsado waaxda caafimaadka in ay sameyso kormeer kale oo ay ku amari karto dayactirid. Haddii aan dayactirka la sameyn, waa in aad guriga ka guurto wakhti macquul ah ka dib marka dayactirka la sameeyo.
Guri-ka-saaridda iska muuqata waxa uu jiraa oo keliya haddii uu kireeyuhu sameyn waayo dayactirka ama adeegyada muhiimka ah. Guri-ka-saaridda iska muuqata caadi ahaan waxay khuseysaa oo keliya xaaladaha aadka u daran ee ah inaan guriga lagu noolaan karin, sida marka guriga laga waayo kuleyliye ama biyo. Haddii aadan rabin inaad guurto, ee bogagga 20 ilaa 27 waxyaabaha aad sameyn karto marka ay jiraan dhibaatooyin daran oo la xiriira dayactirka.
Haddii aad ka soo dacwooto guri-ka-saarid iska muuqato oo aad iska guurto, waxaa laga yaabaa in kireeyuhu ku dacweeyo. Lacagta kireeyuhu kugu dacweyn karo waxay ku xiran tahay nooca uu gurigu yahay. Haddii aad ku jirto heshiis ah bil-bil, kireeyaha ayaa kugu dacweyn kara hal bil oo kiro ah. Haddii aad ku jirto heshiis ah xilli go'an, kireeyuhu wuxuu kugu dacweyn karaa inta ka harsan heshiiska in lagugu leeyahay. Haddii mulkiiluhu kugu dacweeyo magdhow, waa in aad caddeyso in ay jirtay guri ka saarid iska muuqata.
Waa inaad maxkamadda ugu keento waxyaabaha soo socda caddeyn ahaan
gebi ahaan waraaqaha aad u dirtay kireeyaha ee ku saabsan dayactir loo baahnaa
amarradii hagaajinta ee kormeeraha guryaha iyo waaxda caafimaadka.
Si kale haddii loo dhigo, waa in aad caddeysaa in ay xaaladaha aad u xumaayeen oo lagugu qasbay inaad ka guurto. Haddii kireeyaha kugu dacweeyo magdhow, waxaad dalban kartaa in laguu soo celiyo kirada muddadii aad ku noolayd guriga ee uu jiray dhibka dayactirka (eeg bogga 27).
Isla markiiba la xiriir kireeyaha haddii korontada lagaa gooyo. Haddii kireeyuhu joojiyo adeegyada guriga, waxaad dacweyn kartaa in wixii lagaa gooyey laguu soo celiyo. Waxaad sidoo kale ku dacweyn kartaa in aad soo ceshato ugu badnaan 3 jeer qiimaha waxyeellada kaa soo gaadhay ama $500, hadba kii weyn, iyo kharashaadka qareenka. Haddii kireeyuhu kuugu soo celiyo korontada wakhti macquul ah, waxaad ku dacwoon kartaa oo keliya lacagta dhabta ah ee kaaga baxday. Lacag ma heli kartid haddii wixii lagaa xitay ay sabab u ahayd wax adiga ama martidaadu aa sameyseen oo aad waxyeello u geysateen korontada. Kahortagidda wax lagaa xirto oo sharci-darro ah waxaa laguu soo celin karaa marka xaraashku soo idlaado ka dib ama heshiiska amaahda guriga la nasasho.
Dambi yar ayey ku noqoneysaa kireeyaha in uu gooyo korontada, gaaska, ama adeegyada biyaha si aad uga guurto. Kireeyuhu waa in uu caddeeyo in ay jirto sabab macquul ah oo uu u gooyey adeegyada, sida dayactirka. Mararka qaarkood, shirkadda adeegga ayaa goosan kara korontada haddii kireeyuhu bixin waayo biil uu isagu masuul ka ahaa.
Adiga ama kireyste kale ayaa bixin kara biilka gaaska, korontada ama biyaha oo dabadeedna ka goosan kara kirada haddii shirkadda adeegyada
Ay goosato korontada
ay soo dirto ogaysiis kama-dambeys ah in la goyn doono korontada ama
Ay guriga ku soo dhejiso ogeysiis ah goynta korontada.
Keliya waa in aad bixiso biilkii ugu dambeeyey. Uma baahni inaad bixiso wax kasta oo ah biilashii hore ama kharash la socda.
Haddii aad ku nooshahay dhisme ka kooban 1 ilaa 4 guri, waxaad xaq u leedahay in aad la wareegto koontada ama gaaska oo aad adigu isugu qorto sidii macmiil cusub. Waxaad sidaas sameyn kartaa haddii aad ka soo bixi karto shuruudaha laga rabo macmiil kasta oo cusub. Haddii aad noqotid macmiil cusub, lama rabo inaad bixiso WAX ah biilashii hore. Arrintaas waxaa ku jira waa wixii ugu dambeeyay. Shirkadda korontada KUMA weydiin karto inaad bixiso curaar.
Haddii aad xaaladan ku jirto, la xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga si aad caawimaad uga hesho.
Magaalada Minneapolis, waxaa jira sharciyo gaar ah oo ku saabsan korontada, sida
Kireeyuhu waa in uu ku siiyaa ogeysiis qoraal ah (oo lagu daray heshiiska kirada ama dukumiinti gooni ah) isagoo sheegaya yaa ah qofka masuulka ka ah bixinta biilasha aad isticmaashay.
Haddii uusan guryaha ka jirin koranto-cabbire gooni kala ah, gaaska iyo biyaha laga isticmaalo guri kasta, kireeyaha guriga ayaa masuul ka ah bixinta biilasha.
Waxaa sharci darro ah kireeyaha inuu kaa xirto guriga karada ah, in alaabtaada la dhigo jidka, ama in la beddelo qufulka sabab kasta ha noqotee, xataa haddii aad la daahdo kirada. Kireeyuhu wuxuu guriga kaa saari karaa oo keliya marka uu keensado dacwad maxkamadeed oo ah guri ka saarid (ama "deggenaansho aan sharci ahayn") oo adiga kaa dhan ah Qofka kaliya ee xoog kaaga saari kara guriga waa booliis fulinaya sharciga (booliis ama shariifka ciidanka asluubta magaalada). Laakiin booliisku waxay sidaas asmeyn karaan waa keliya marka kireeyuhu kaaga guuleysto maxkamadda oo garsooruhuna soo saaro Qoraalka Qaadashada Hantida.
Haddii guriga lagaaga xirto si sharci darro ah oo aad rabto inaad ku laabato guriga, samee waxyaabaha soo socda
Raadso qof kuu ah "markhaati." Waxaa laga yaabaa inaad weydiisato saaxiib ama qof kale oo ku nool dhismaha in uu ku soo raaco markaad rabto inaad ku laabato guriga
U wada taga kireeyaha guriga adiga iyo markhaatiga oo ka codso kireeyaha inuu kuu oggolaado inaad guriga ku laabato iyo
U sheeg kireeyaha inaysan sharci ahayn in guriga la iska xirto.
Haddii kireeyuhu weli diiddan yahay inaad ku soo noqoto guriga, samee waxyaabaha soo socda
La xiriir booliiska oo ka codso inay kaa caawiyaan inaad dib ugu laabato guriga.
U sheeg booliiska inaad rabto inaad xareysato dacwo.
Iska hubso inaad qorato lambarka sarkaalka booliiska. Macluumaadkaas waxaa laga yaabaa in uu ku caawiyo haddii aad hesho amar maxkamadeed oo aad guriga ugu noqoto.
Haddii aadan weli dib ugu laaban karin guriga, raadso qareen, xafiiska adeegyada sharciga ee degmadaada ama qareenka magaalada isla markiiba si aad talaabo sharci ah uga qaaddo kireeyaha. Waxaad isla markiiba aadi kartaa maxkamada si aad isla markaaba uga soo hesho amar degdeg ah oo aad ugu noqoto guriga. Waa in aad dacwad-dhageysiga maxkamadda keensato caddeyn ah meeshaad ku nooshahay, heshiis kiro, ama wax cinwaankaagu ku yaal, sida laysanka baabuurka ama xaashiyaha biilka.
Markaad dib ugu noqoto gurigaaga waxaad u baahan kartaa inaad dacwad ka gudbiso kireeyaha si laguu siiyo lacagtii kaa baxday guriga markii lagaa xirtay. Waxaad ku dacweyn kartaa kireeyaha lacag ah mid ilaa 3 jeer ka badan kharashyada dhabta ah ee jeebkaaga ka baxay (sida lacagta aad ku bixisay meel kale oo aad ku noolaatay) ama $500, hadba tii idiinkua badan. Waxaad dirsan kartaa dacwo ah Maxkamada Heshiisiinta hadii lacagtaada dacwada ay tahay $15,000 ama wax ka yar. Waxaa jirta lacag lagu xareeyo markaad bilaabeyso kiis maxkamadeed ama waxaad heleysaa (cudurdaar) haddii aadan awoodin. Xoghaynta maxkamadda ka codso waraaqaha lagaaga dhaafayo lacagta.
Difaacidda ah xirashada sharc-darrada ah waxay sidoo kale khuseysaa kireystaha haddii ay jirtay xaalad ah xaraashka guriga ama in amaahdii guriga lala noqday.
Haddii kireeyuhu kugu khasbo inaad guurto, waa in ay jirto dacwo maxkamadeed oo ah mid guriga la isaga saarayo (oo waagii hore la oran jiray "sharci-darro guri lagu haysto") oo adiga kaa dhan ah.
Dacwadaha maxkamadda ee la isaga saarayo guryaha ayaa lagugu sameyn karaa sababo badan awgood, sida
in la bixin waayo kirada
in la guriga laga guuri waayo ogeysiis ka dib
in la jebiyo xeerarka kirada
in si ula kac ah loo burburiyo guriga kirada
in guryaha lagu sameeyo "dhibaato dadweyne" – sida iibinta ama haysashada daroogo guryaha dhexdooda.
Haddii uu kireeyuhu maxkamada ku guuleysto, garsooraha wuxuu kireeyaha u go'aamiyaa "Qoraalka La-noqonshada Guriga". Qoraalkaasi waa amar maxkamadeed oo kireystaha ku khasbaya in aad uga guurto 24 saac gudahood. Xaaladaha qaarkood garsooraha wuxuu soo qorayaa "sii joogid" (dibu-dhigid) ilaa iyo 7 maalmood si kireeyaha loo siiyo wakhti uu ku helo meel cusub oo uu ku noolaado. Taas macnaheedu waa in uu garsooruhu bixin doono 7 maalmood oo dheeraad ah oo looga guuro ka hor inta uusan Qoraalku dhaqan gelin. Marka Qoraalku dhaqan galo, kireeyuhu wuxuu haystaa 24 saac oo keliya si uu guriga uga guuro.
Markaad ogtahay in kireeyuhu bilaabay dacwad-dhageysiga maxkamadeed oo ah in guriga lagaa saarayo oo ay Dacwo iyo Waraaq Maxkamadeed (waa wax sharci-darro ah oo kuu sheegaya in aad timaaddo Maxkamadda Guryaha). Ha iloobin oo ha iska tuurin waraaqahaas. Ka fiirso sida aad ku hesho waraaqahaas. Waraaqaha waa in "la isugu keeno" sida saxda ah. Si dhakhso ah ula xiriir qareean ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga.
Dacwad-dhageysiga maxkamadda badanaa waxaa ballan la isu qabtaa 7 ilaa 14 maalmood ka dib markaad hesho Warqadda Maxkamadda iyo Dacwada.
Warqadda Maxkamadda iyo Dacwada ayaa laguugu sheegi doonta sababta uu kireeyuhu kuu doonayo in aad guriga uga baxdo. Waxay sidoo kale ku qoran taariikhda, wakhtiga, iyo goobta dacwad-dhagaysiga maxkamadda. Haddii aad ku nooshahay degmada Hennepin ama Ramsey, kireeyuhu waxa kale oo uu ka codsan karaa garsooraha kirada aan la bixin ama lacag kale oo loo maleyn karo in lagugu leeyahay wakhtiga dacwad-dhageysiga ka saaridda guriga.
Warqadda Maxkamadda iyo Dacwada waxaa laga yaabaa in laguugu karaa kireeyuhu waxa uu kaaga saarayo guriga oo ah kiro aadan bixin. Haddii aad ogolaato in kiro lagugu leeyahay oo aad haysato lacag aad ku bixiso markaas waa in aad aaddo dacwad-dhageysiga maxkamadda.
Dacwad-dhageysiga dacwada waxaad ku bixin kartaa kirada lagugu leeyahay oo lagu daray lacagta maxkamadda iyo wixii kale oo ah adeeg. Haddii aad sidaas sameyso waxaad "ku sii jiri kartaa" heshiiskaaga kirada oo garsooruhuna wuxuu go'aansan doonaa in aad joogi karto. Haddii aadan wada bixin karin lacagta laakiin aad waxyar bixin karto, markaas waxaa macquul ah in kireeyaha uu kiiska kula xalliyo oo uu kuu oggolaado inaad joogtid haddii aad raaci karto qorshaha lacag-bixinta.
Waxaa muhiim in aad aaddo dacwad-dhageysiga maxkamadda. Haddii aad tagi weydo, waxaad si toos ugu ayaa kiiska lagaaga guuleystay. Waxaa lagaa rabaa in aad isla markaasba guurto. Waxa kale oo laga yaabaa in aad lacag bixiso.
Keligaa ayaa aadi kara dacwad-dhageysiga ama waxaa ku raaci kara qareen ama qof u dooda arrimaha guryaha. Haddii aad adigu wakiil isaga tahay dacwad-dhegeysiga, talo ka doono qareen ama qofka u dooda arrimaha guryaha ka hor dacwad-dhageysiga.
Ilaa aad heshiis wada gaartaan kireeyaha, kireeyuhu waa in uu dacwad-dhageysiga ku caddeeyo sababaha guriga lagaaga saarayo.
Marka uu kireeyuhu dhammesyto, u sheeg garsooraha sababta aadan guriga uga guureyn. Hubso inaad u sheegto garsooraha wixii difaac ah ee aad u maleyneyso inaad haysato sida aargoosi, takoorid, iyo dhibaatooyin ah dayactirka. Waxaa fiican in la diyaariyo "Jawaab" qoran ka hor dacwad-dhageysiga maxkamadda. Ujeedada "Jawaabta" waa in laga jawaabo liiska cabashooyin adiga kaa dhan ah. Sidoo kale, keen dhammaan caddeynta aad ku taageerayso kiiskaaga, sida sawirro, caddeymo, waraaqo, markhaatiyaal, warbixinta kormeerka, amarrada hagaajinta, iwm. Weydii su'aalaha aad qabto haddii aadan fahmin waxa dhacaya.
Garsooraha ama dhexdhexaadiyuhu wuxuu kiiska u diri karaa maxkamad haddii ay jiraan "ismaandhaaf dhab ah" oo ku saabsan kiiska (tusaale ahaan, haddii adiga iyo kireeyaha aad isku khilaaftaan haddii kirada la bixiyey). Maxkamadeyntu badanaa waxay noqon doontaa dhowr maalmood gudahood laga bilaabo taariikhdii maxkamadda koowaad. Maxkamadeynta waa in aad ku soo bandhigto gebi ahaan caddeymahaaga, sida sawirro ama caddeymo. Waa inaad diyaar u ahaato inaad sheegto hadalka qeybtaada sida ugu faahfaahsan iyo inaad keento markhaati kasta oo kiiskaaga taageere u ah. Uma baahnid qareen xilliga maxkamadeynta, laakiin waxaa fiican ah in aad si dhakhso leh ula xiriirto qareen ama adeegyada sharciga ee deegaankaaga haddii laguu qabto ballan ah maxkamadeyn.
Ka dib dacwad-dhageysiga adiga iyo kireeyaha, garsooraha ama dhexdhexaadiyaha ayaa go'aamin doona in aad guriga ka guureyso iyo in kale. Haddii aad ku guuleysato, guriga ayaad ku sii jiri doontaa. Haddii uu kireeyuhu ku guuleysto, garsooruhu waxa uu saxiixi doona Qoraal Haysashada oo kugu amreysa in aad guriga ka guurto.
Haddii kireeyuhu ku guuleysto, u sheeg garsooraha in ay kugu adkaan doonto inaad isla markiiba guurto iyo inaad u baahan tahay xoogaa wakhti dheeraad ah. Garsooruhu waxa uu ku siin karaa 7 maalmood oo dheeraad ah oo aad ku guurto. Waa in aad codsato waqtiga dheeraadka ah si aad u hesho.
Haddii lagaa guuleysto, waxaad haysataa 10 maalmood oo aad rafcaan uga qaadan karto go'aanka. Haddii aad rabto inaad rafcaan qaadato, isla markiiba la xiriir qareen. Haddii uu dhexdhexaadiye ku dhageystay kiiska degmada Hennepin ama Ramsey County, waxaad haysataa 10 maalmood inaad ku codsato inuu garsoore dib u eego dacwadaada.
Haddii aad racfaan qaadan weydo oo aad ka guuri weydo taariikhda garsooruhu kuu sheego, Ka-guuridda Guriga waa in siday tahay loo "fuliyo" (waxaa imaanaya) booliska magaalada. Markaas waxaad haysataa 24 saacadood oo ad ku guurto.
Waxaad Keensan Kartaa Difaacid Ah Ka-Saaridda Guriga
“Difaaciddu” waa dood ama sabab aad u sheegto maxkamada si ay ugu taageerto kiiskaaga. In kasta oo uusan buug-yarehan ka wada hadleyn gebi ahaan difaacyada suurtagalka ah, difaacyada ugu caansan waxaa ka mid ah. Haddii aad ku nooshahay guryaha dowladdu leedahay ama ay kabto, difaacyo dheeraad ah ayaa laga yaabaa in aad u isticmaasho kiiskaaga (eeg bogga 56). La xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee degmadaada si aad u ogaato difaacyada loo isticmaalayo kiiskaaga.
Bogga dambe ee buug-yarehan waxaad ku arkeysaa foom "Jawaab" ah oo aad u adeegsan karto in aad ku qorato difaacaaga si aad uga jawaabto cabasho ah (haynsasho sharci-darro ah) oo ka timaadda kireeyaha (eeg bogga 60). Si aad u isticmaasho Jawaabtaas, samee waxyaabaha soo socda:
Meesha loogu talagalay ku kala qoro magacyada dhinacyada iyo lambarka dacwada ee Warqadda Imaanshaha Maxkamadda
Iska hubso difaacidda khuseysa kiiskaaga
Saxiix oo taariikhda ku qor foomka
Koobbi ka sii Jawaabta oo dhameystiran Maamulaha Maxkamadda oo koobbi kalena sii mulkiilaha guriga ah marka la joogo dacwad-dhageysiga adiguna hayso koobbi. Xusuusnow in aad xaq u yeelan karto inaad codsato in lagaa cafiyo lacagat maxkamadda.
Foomka Jawaabta kuma jiro difaacyada qaarkooda khuseeya oo keliya guryaha dowladdu leedahay ama ay kabto. Haddii aad ku nooshahay guryaha dowladdu leedahay ama kuwa ay kabto (oo ay ku jiraan Section 8), la xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga si aad uga hesho caawimaad.
Warqadaha Ka-Saaridda Guriga Ee Maxkamadda Oo La Waayo - “La Isu Gudbin Waayo”
Waxaa jira sharciyo ku saabsan sida laguugu soo gudbinayo (laguu siinayo) waraaqaha maxkamadda. Kireeyuhu kuma dacwayn karo si uu guriga kaaga saaro adigoo aan si sax ah u helin waraaqaha. Waa inaad hesho Waraaqda Yeerista Maxkamadda iyo Cabashada ugu yaraan 7 maalmood ka hor dacwad-dhageysiga maxkamadda. Xaaladaha badankood, Waraaqda Yeerista Maxkamadda iyo Cabashada waa in uu gacan-ka-dhiib, kuugu keeno qof kale oo aan ahayn kireeyaha. Waraaqahaas waa inaan la siin qof aan ku nooleyn gurigaaga ama aan "ugu habbooneyn da' ahaan iyo taxaddar ahaam", sida ilmo yar. Marka keliya ee uu kireeyuhu ku soo diri karo waraaq cinwaankaaga waa haddii lagaa waayo degaanka ka dib marka waraaqaha la isku dayo laba jeer in la geeyo. Ugu yaraan mid ka mid ah isku daygu waa in uu noqdaa inta u dhexeysa 6-da ilaa 10-ka fiidnimo
Ogeysiiska Kireeyaha, Diiwaangelinta Iyo Leysanka Kireynta
Kireeyaha kuma dacwoon karo in uu guriga kaa saarayo adigoon ogeyn magacyada iyo cinwaannada milkiilaha ama maamulaha guriga, iyo magacyada iyo cinwaannada wakiillada milkiilaha guriga oo adiga kaa qaadi kara ogeysiisyada.
Haddii uu kireeyuhu leeyahay magac ganacsiyeed oo aanu ahayn shirkad weyn, kireeyuhu waa in uu magaca ganacsiga ka diiwaangeliyo Xoghayaha Arrimaha Gobolka. Haddii kireeyuhu is diiwaan galin waayo, maxkamaddu waa in ay joojiso kiiska ka-saaridda guriga ilaa uu kireeyuhu is diiwaan geliyo. Hadday taasi dhacdo, kireeyuhu waa in uu ku siiyo $250. Taleefan kula xiriir Xoghayaha Arrimaha Gobolka (651) 296-2803 si aad u hubiso in kireeyuhu uusan ahayn shirkad oo aad rabto inaad ogaato in uu magaca ganacsiga u diiwaan gashan yahay. Xoghayaha Arrimaha Gobolka ayaa ku siin kara caddeyn sheegeysa in uusan magac ganacsiga ah diiwaan gashneyn.
Minneapolis iyo magaalooyinka kale qaarkood waxa ay u baahan yihiin in kireeyuhu haysto leysan ama shatiga kirada ka hor inta aysan kireysan guryahooda. Haddii aad ogaato in gurigaagu uusan ruqsad haysan waa inaad ka heshaa diiwaanka waaxda guriyeynta in shati uusan jirin. Waa wax ku xiran magaaladaada, balse kireeyuhu waxa uu xaq u lahaan karaa inuu kaa saaro guriga marka aad bixin weydo kiradaada haddii uusan kireeyuhu haysan shati.
Dacwooyinka Kirada Marka La Bixin Waayo
Haddii ay Dacwadu sheegeyso in kiro lagugu leeyahay, waxaad heli doontaa difaac haddii aad caddeyn karto inaad kiradii iska bixisay mar hore. Maxkamadda keenso gebi ahaan caddeymaha, jeegaga la joojiyay, ama markhaatiyaal si aad ugu muujiso in aad kiradii bixisay.
Haddii aad bixisay qeyb ka mid ah kiradaada oo uusan kireeyuhu ku siin caddeyn sheegaya in aad bixiso inta kale ee kiradaada, kireeyaha ayaa laga yaabaa inuusan kaa saari karin guriga inta kale ee aadan bixin awgeed. Tan waxaa ka mid ah lacag-bixin wixii ah qeyb ahaan bisha ay maxkamaddu socoto. Si kastaba ha noqotee, weli waxaa laga yaabaa in kirada kugu leeyahay kireeyaha, oo waxaa lagaa ceshan karaa qeyb ka mid ah curaarta marka aad ka guureyso ama aad ku dacweyso Maxkamadda Dhexdhexaadinta si aad curaarta u qaadato.
Haddii aad kirada u hakisay kireeyaha oo sameyn waayey dayactir loo baahnaa, waa inaad keento kirada aad reebatay (lacag caadi ah) maxkamadda sababtoo ah waxaa laga yaabaa in aad maxkamadda curaar ahaan u dhigto. Sidoo kale, soo qaado gebi ahaan sawirrada, waraaqaha kireeyaha, warbixinnada kormeerka, iyo markhaatiyaal wixii kugu caawin kara caddeynta kiiskaaga. Waxaad ka codsan kartaa garsooraha in uu yareeyo kiradaada dayactirka awgiis (eeg bogga 27).
Haddii aad maxkamadda keento kirada lagugu leeyahay (ama haddii aad bixisay kirada ka dib markii kireeyuhu kiiska kugu furay), waxaad ka codsan kartaa maxkamadda in ay ku siiso muddo 7 maalmood ah si aad ugu bixiso lacagta kireeyaha iyo tan daahidda haddii maxkamaddu kugu amarto in aad bixiso. Kharashka kireeyaha badanaa waxaa lagu dhex qoraa Dacwada.
Dacwooyinka Kordhinta Kirada
Haddii kireeyuhu si aan sax ahayn kuugu kordhiyo kirada, maxkamad waa in ay amarto in aadan bixin kororkaas. Kireeyuhu waa inuu ku siiyo ogeysiis sax ah oo lagu kordhinayo kirada oo mana kordhin karo kirada si uu kaaga aargoosto (eeg bogga 32). Waa inaad maxkamadda keento wixii kiro ah ee lagugu lahaa kororka ka hor. Haddii garsooruhu go'aamiyo in kororku sax ahaa, waa in aad bixisaa lacagta kirada ah ee la kordhiyey. Maxkamadda ayaa kuu sheegi doonta marka aad bixineyso kororka.
Dacwooyinka Kharashaadka La Bixin Waayo
Kireeyeyaal badan ayaa lacag dul saarta kirada lala soo daaho oo waxay ku soo daraan lacagta kirada. Haddii aadan ku qanacsaneyn lacag dulsaar ah, waa inaad u sheegto garsooraha. Xataa haddii heshiisku u oggol yahay inuu kireeyuhu cadsado lacagta daahitaanka, waxaa laga yaabaa in ay ansax noqon weydo lacagtaas. Sharci ahaan, lacagta soo-daahidda waa in ay ahaato mid macquul ah waana inay dabooshaa oo keliya kharashka uu kireeyuhu bixiyo markaad kirada la daahdo. Waa in aysan noqon ciqaab. Kala hadal qareen si aad u fahamto haddii ay lacagta daahitaanka kireeyaha sharci tahay.
Ogeysiiska Dacwadaha Ka-Saaridda Guriga
Haddii Dacwadu sheegeyso in aad heshay ogeysiis aad guriga uga guureyso oo aadan guurin, hubso inuu kireeyuhu ku siiyo ogeysiis habboon. Kireeyuhu caadi ahaan maahan in uu sabab la'aan kuu siiyo ogeysiiska, laakiin kaama aargoosan karo (eeg bogga 32). Haddii kireeyuhu kaa aqbalo kirada wixii ka dambeeya taariikhda la rabay in aad guurto, ogeysiiska guuridda waxba kama jiraan. Maxkamadda u keen gebi ahaan caddeymah, jeegaga la joojiyay, ama markhaatiyaal si aad u caddeyso in kireeyuhu kaa qaatay kiro.
Dacwooyinka Jebinta Heshiiska
Haddii Dacwadu sheegeyso in aad jebisay heshiiska kirada oo aadan waxba jebin, maxkamada keen sawirro, dukumiintiyo, caddeymo, iyo markhaatiyaal si ay kaaga caawiyaan in aad caddeyso kiiskaaga. Haddii kireeyuhu kaa qaato kirada ka dib taariikhaha uu kireeyuhu ku yiri waad jebisay heshiiska, kireeyaha waxa uu ka tanaasulay xaquuqda uu u leeyahay in uu sababtaas kaaga saaro guriga.
Haddii Dacwadu sheegeyso inaad guriga ku haysatay daroogo sharci darro ah, waxay noqon kartaa difaacid haddii ay ahaan lahaayeen dadka kula nool oo daroogada lahaa ama u oggolaaday guriga, ilaa kireeyuhu caddeeyo in aad ogeyd ama aad ogaan kartay.
Haddii aad naafo tahay oo aad aamminsan tahay in jebinta heshiiska ay la xiriirto naafannimadaada, waxaa laga yaabaa inaad difaac u haysato ka-saarista guriga haddii kireeyuhu uusan sameynin dedaal macquul ah si uu kuula shaqeeyo naafannimada awgeed. Waa inaad ka codsataa kireeyuhu in uu kugula shaqeeyo sharciga naafannimada. U sheeg qorshe macquul ah si looga hor tago dhibaatooyin kale oo dhaca mustaqbalka. Qor talada aad u sheegto.
Haddii aad ku nooshahay guryaha dowladdu leedahay ama ay kabto, waxaa lagaaga saari karaa oo kaliya haddii ay jiraan xadgudubyo culus ama soo noqnoqda oo ku saabsan shuruudaha heshiiska, ama sabab kale oo sax ah. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah dadka haysta Qeybta 8 hadda waa la joojin karaa sabab la'aan dhamaadka sannadka ugu horreeya ee heshiiska, ama dhammaadka muddada soo socota ee bilaabmeysa dhammaadka sannadka koowaad. Waa in aad la xiriirto qareen ama xafiiska adeegyada sharciga haddii wax su'aalo ah la qabo.
Dacwooyinka Jebinta Heshiiska Iyo Kirada Aan La Bixin
Haddii Cabashadu sheegeyso in lagaa saarayo kirada aan la bixin awgeed iyo jebinta heshiiska, maxkamaddu waxay fiirineysaa jebinta kirada marka hore. Waa in aadan maxkamadda ku bixin kirada aad haysay markaas. Haddii maxkamaddu go'aansato in aad jebisay heshiiska oo aad guureysid, maxkamadda kumma bixinaysid kiro aad hayso. Haddii maxkamaddu go'aansato in aadan ku xadgudbin heshiiska kirada, markaa maxkamadda ayaa eegi doonta kirada aad bixin weyday.
Waxaa Jira Difaacyo Kale Oo Ah Dacwadaha Ka-Saaridda Guriga
Xusuusnow in difaacyada aan kor ku soo sheegnay ay yihiin kaliya qaar ka mid ah difaacyada caamka ah ee laga heli karo kiisaska ah ka-saaridda guriga. Waa in aad la hadasho qareen si aad u hubiso inaad ka fakartay gebi ahaan difaacyada khuseeya kiiskaaga.
Haddii lagaa guuleysto dacwada ka-saaridda, garsooruhu wuxuu soo saari doonaa Amarka Ka-saridda Guriga (amar ah inaad guurto) oo adiga kaa dhan ah.
Maalinta, ama wakhti kasta oo ka dambeeya, garsooruhu wuxuu ku leeyahay waa inaad guriga uga guurto oo kireeyaha waxa uu ka soo qaadan karaa Qoraalka maxkamadda oo uu u sii geyn karo booliiska.
Booliisku waxa ay kuugu fulin doonaan Amarkaas sida ugu dhakhso badan, xataa isla maalintaas. Booliisku si toos ah kuugu dhiibi doona Qoraalka ama albaabka ayey kuugu dhejinayaan.
Qoraalku wuxuu kuu sheegayaa inaad ka guurto guriga 24 saac gudahood.
Haddii aad ku guuri weydo 24 saac gudahood, booliiska ayaa soo laabanaya oo si khasab ah kaaga saaraya guriga. Mararka qaarkood booliiska waxay ku qaadan kartaa in ka badan 24 saac inuu soo laabto.
Haddii lagaaga guuleysto dacwad-dhageysiga guuridda ah, raadso guri cusub isla markiiba. Haddii aad sii joogto guriga ka dib marka la gudbiyo Amarka, waxaad ku jirtaa khatar. Haddii aadan guuri karin ka hor intaan loo gudbin Qoraalka, ilaalso alaabadaada oo gurigaas ka soo qaado alaabta, sida waraaqaha muhiimka ah, daawada, dharka, cuntada qaarkeed, iwm. Marka khasab kaaga saarayo guriga, alaabtaada oo dhan waxaa lagu geyn doonaa meel alaabta lagu keydiyo.
Kireeyuhu waa in uu meel ku xareeyo wixii alaab ah ee looga tago guriga ka dib marka booliisku khasab kaaga saaro guriga. Sababtaas awgeed waxaa muhiim ah inaad ka qaadato alaabtaada intii aad kari karto ka hor inta aan booliislu guriga kaa saarin. Kireeyuhu wuxuu alaabta kuu dhigi karaa gurigaaga cusub ama meel kale.
Haddii kireeyuhu alaabtaada dhigo meel ka baxsan dhismaha (meel kale), kireeyuhu wuxuu ballan i dhigi doonaa booliiska si uu u keeno dadka rara alaabta guryaha. Dadkaas ayaa soo rari doona alaabtaada oo dhan oo waxay dhigi doonaan maqaasiin. Si aad alaabtaada u soo ceshato, waa inaad bixiso kharashkii raridda, guurista, iyo maqaasiinka. Marka ay alaabtu maqaasiin sii taallo, waxaa kugu sii badan doonta lacagta. Haddii aad lacagta bixin weydo ilaa 28 maalmood gudahood, kireeyuhu wuxuu iibin karaa alaabtaada wuxuuna u isticmaali karaa lacagtaas inuu ku bixiyo kharashkii guuridda iyo maqaasiinka.
Haddii kireeyuhu qorsheysto in uu alaabtaada dhigo maqaasiinka gruyaha (ee gurigaaga), kireeyuhu waa inuu kuugu soo celiyo alaabta 24 saacadood gudahood markaad ka dalbato.
Ogow: Uma baahnid in aad bixiso kirada aadan bixin, kharashkii daahitaanka, ama curaar si aad alaabtaada u soo ceshato. Waxaad u baahan tahay oo keliya waa in aad bixiso kharashka guuritaanka iyo maqaasiinka haddii alaabta la geeyey meel ka baxsan dhismaha.
Haddii alaabtaada gaarka ah uu kireeyuhu qaato ama aad guriga uga tagto (sida haddii aad ka baxdo guriga oo aadan soo noqon), kireeyuhu wuxuu alaabta geyn karaa maqaasiin. Si aad u soo ceshato alaabtaada, waa in aad waraaq u soo qorto kireeyaha oo ka codsato in laguu soo celiyo alaabtaada. Koobbi ka reebo caddeynta. Kireeyuhu waa in uu alaabta kuugu soo celiyo 24 saac gudahood haddii alaabta la dhigay meel ka mid ah dhismaha. Haddii alaabta la geeyey meel kale, kireeyuhu waa in uu alaabta kuugu soo celiyo 48 saacadood gudahood. Wakhtiyadaas kuma jiraan maalmaha sabtiga iyo axadaha iyo ciidaha.
Haddii kireeyuhu uusan kuu soo celin alaabtaada shakhsiga ah ka dib marka uu kaa helo waraaq, adiguna waxaad soo dacweyn kartaa in alaabta laguugu soo celiyo. Marka lagu daro bixinta qiimaha alaabta ama lagu amro kireeyaha inuu ku soo celiyo alaabtaada, garsoore ayaa ku amri kara kireeyuhu in uu ku siiyo lacag intii uu kaa haystay alaabta iyo kharashka qareenka.
Kireeyaha guriga waxa uu kugu dacweyn karaa wixii ku kacay raridda iyo keydinta alaabta. Kireeyuhu waa in uu alaabta haysan karaa 28 maalmood ka dib ogeysiiska dhabta ah ee markaad ka baxday guriga ama ka dib markii ay u muuqato kireeyaha in aad gurigii isaga baxday. Kireeyuhu wuxuu iibin karaa ama ka takhalusi karaa alaabtaada ka dib markay ka soo wareegato 28 maalmood. Ugu yaraan 2 usbuuc ka hor iibinta alaabta, kireeyuhu waa in uu sameeyo dedaal macquul ah oo uu kugu wargelin karo. Lacagta iibka waxaa loo isticmaali doonaa in lagu bixiyo wixii deyn ah ee kireeyuhu kugu leeyahay. Si kastaba ha ahaatee, kireeyuhu waa in uu ku siiyo wixii lacag ah ee ka soo hara iibinta alaabtaada haddii aad uga soo codsato qoraal ahaan. Arrintaas oo ah difaacid waxaa ku jir dadka lagu dul iibsado guriga ama laga joojiyo amaahdii iibka guriga.
Haddii aad go'aansato in aad adigu iskaa u guurto, iska hubi in aad bixiso ogeysiis qoraal ah sida saxda ah haddii aad heshiisku yahay xilli sida kiro bil-bil ah. Kireeyuhu waa in uu helo ogeysiiskan markay tahay 11:59 saqda dhexe maalinta ka horreysa ee kirada ku eg tahay kirada ugu dambeysa.
Tusaale ahaan, haddii aad kiradaadu tahay bil-bil, oo aad rabto inaad ka guurto ugu dambeyn 1-da Feberaayo, waa in aad milkiilaha guriga ku siiso ogeysiis qoran oo ah guuriddaada ka hor saqda dhexe, 31-ka Diseembar.
Xataa haddii aad jebinaysid heshiiska oo aadan bixin karin ogeysiis sax ah, weli waxaa lagaa rabaa ogeysiis ah 3 maalmood haddii aad guureyso inta u dhaxeysa Nofeembar 15 ilaa Abriil 15. Markaad bixiso ogeysiiska 3-da maalmood, masuuliyad lagama saari doono waxyeello kasta oo loo geysto biyaha iyo dhuumaha kuleylka qabowga awgiis. Uma baahnid in aad kireeyaha siiso ogeysiis ah in aad guureyso dhammaadka heshiiska kirada go'an oo aadan cusbooneysiin doonin. Eeg bogga 10 wixii dheeraad ah oo ku saabsan heshiiska go'an iyo kan xilliga ah.
Waa inaad uga tagto guriga sidii aad ugu timid markii aad soo degtay, marka laga reebo duugowga iyo dhammaadka caadiga ah. Si taxaddar leh u nadiifi. Markaad diyaar u tahay in aad ka baxdo, fiiri meel kasta si aad u hubiso in ay wax walba OKEEY yihiin. Haddii kireeyuhu ku qanco guriga, kireeyaha waa in uu waraaq ku qoro oo uu saxiixo. Koobbi naftaada u hayso adigu. Sidoo kale waxaa fiican in aad ka qaaddo sawirro taariikh leh ka dib markaad nadiifiso.
Markaad baxayso, fureyaasha u gee kireeyaha guriga. Ka qaado caddeyn sheegeysa in aad siisay.
Intaadan bixin ka hor, sii kireeyaha ogeysiis qoraal ah oo ah cinwaan lagaala soo xiriiri karo. Sidan oo kale, kireeyuhu waa inuu kuu soo celiyo curaartaadii. Haddii aadan rabin kireeyuhu in uu haysto cinwaankaaga cusub, sii cinwaan kale oo aad waraaqaha ku heli karto. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa sanduuqa boostada.
Haddii aad guriga dad la wadaageyso oo uusan qof ka guurin, kireeyuhu wuxuu ka qaadi karaa kirada kiraystayaasha ku hara guriga. Xataa ka dib markaad guurto, masuul ayaad noqon kartaa qof aad isla nooshihiin qeybtiisa kirada haddii qofkaasi iska tago isagoon bixin ogeysiis sax ah ama uu bixin waayo kirada. Haddii ay sidaas dhacdo, waxaad dacwayn kartaa qofkii kula noolaa si aad lacagta ugu soo hesho Maxkamadda Dhexdhexaadinta. Si aysan sidaas u dhicin, ogeysiis sax ah sii kireeyaha in aad guriga ka baxaysid oo aadan masuul ka noqon doonin kirada mustaqbalka. Arrintaas ma shaqeyn karto haddii aad saxiixday heshiis go'an, laakiin waa in aad isku ilaaliso kiro bil-bil ah (heshiis xilliyeed).
Haddii aad sameyso kiro-hoosaad, weli adiga ayaa mas'uul ka ah heshiiska illaa ay kireystayaal cusub saxiixaan heshiiska kirada guriga. Haddii aysan taasi macquul ahayn, samee heshiis qoraal ah oo idiin dhexeeya adiga iyo kireystayaasha cusub, oo adigu ka dhex bax waajibkii kirada si ay iyagu masuul uga noqdaan wixii dhaca.
Kireeyaha guryaha badanaa waxa uu weydiiyaa kireystayaasha in ay bixiyaan curaar ama deebaaji ah wixii soo gaara guriga marka laga guuro. Haddii kireeyuhu doonayo inuu kordhiyo curaarta guriga intaad ku nooshahay guriga, isla ogaysiiskaas qoran ayaa loo baahan yahay si loo kordhiyo kirada (eeg bogga 37). Haddii aadan oggolaan kordhinta, waa in aad si dhakhso leh ugu jawaabto ogeysiiska diidmo qoraal ah, intii aad bixin lahayd kororka lacagta. Waxaa lagaa rabi karaa in aad ka baxdo guriga haddii aadan rabin inaad bixiso kororka lacagta.
Kireystayaasha looma oggola in ay curaarta u isticmaalaan in lagu bixiyo kirada bishii hore. Waa in aad bixiso kirada bisha ugu dambeysa, in aad guurto, oo aad sugto in laguu soo celiyo curaartaadii ka dib markaad guurto. Xusuusnow in aad kireeyaha siiso cinwaankaaga cusub ee lagaala soo xiriiri karo.
Haddii guriga la iibiyo intaad kirada ugu jirto, curaartaada waa in la siiyo kireeyaha cusub ama kireystaha 60 maalmood gudahood. Si kastaba ha ahaatee, kireeyaha cusub ayaa masuul ka ah soo-celinta curaartaada xataa haddii aan iyaga lagu wareejin.
Markii aad ka baxdo guriga, kireeyuhu waa in uu kuu soo celiyaa curaartaada ama wixii deebaaji ah oo uu dulsaar la socdo. Lacagta dulsaarka ah waxaa laga dhigay 3% sannadkiiba ilaa wixii ka dambeeyey 1-dii Ogoosto, 2003 iyo 1% sannad kasta oo ka sii dambeeya. Dulsaarka curaarta kama bilaabmeyso ilaa aad wada bixiso lacagta curaarta ah oo dhan. Markaad bixiso curaarta oo dhan, dulsaarku wuxuu ka bilaabmayaa bisha ku xigta.
Tusaale ahaan, Haddii aad u guurto guri kale bisha Jannaayo oo lagaaga baahan yahay lacag dhan $600 oo curaar ah oo uu kireeyuhu kuu oggolaado in aad ku bixiso curaarta $200 bishiiba Jannaayo, Febraayo iyo Maajo, dulsaarka ma bilaabayo ilaa laga gaaro Abriil (waa haddii lacagta si buuxda loo bixiyo ilaa Maajo).
Kireeyuhu waa in uu ku siiyo curaarta oo dulsaar la socdo ama kuu soo diro faahfaahin qoraal ah oo ku saabsan reebashada qeyb ka mid ah lacagta 3 toddobaad gudahood (21 maalmood) ka dib dhammaadka kireysiga iyo ka dib markaad hesho cinwaan cusub. Haddii aad guurto oo sababtuna tahay in dhismaha la xiray, kireeyuhu waa in uu kuugu soo celiyo curaarta 5 maalmood gudahood Ka dib markaad guurto (eeg bogga 28).
Haddii ay jirto kiro aan la bixin, kireeyaha ayaa ka goosan kara lacagta curaarta ah. Haddii ay jiraan kharashaad ku saabsan ssameynta guriga oo aad wax ka jebisay intii aad ku jirtay ilaa markii aad soo degtay, kireeyaha ayaa sidoo kale kaa goosan kara kharashkaas curaarta. Arrimahaas waxaa ka mid ah sida nadaafadda, rinjiyeynta, roogga cusub, iwm. Laakiin, lagaama rabo in aad bixiso "duugowga iyo dhammaadka caadiga ah." Badanaa, "duugowga iyo dhammaadka caadiga ah" waxay ku xiran tahay duruufaha.
Tusaale ahaan, haddii aad ku nooshahay meel 3 sano ah oo loo baahan yahay rinjiyeyn markaad guureyo, waxaad ku doodi kartaa in ay tahay duugoow iyo dillaac caadi ah oo aadan masuul ka ahayn.
Laakiin, haddii guriga mar labaad la rinjiyeeyey markii aad ka guurtay 6 bilood ka hor oo uu mar kale u baahdo rinji, arrintaas waxay u badan tahay in aan loo tixgelin doonin "duugoobid iyo dillaac caadi ah." Marka, waxaa laga yaabaa in aad markaas bixiso.
Haddii kireeyuhu uusan kuu soo celin curaarta ama qoraal faahfaahin ah oo ku saabsan sababta aad u heli weyday, waxaad ku dacwoon kartaa kireeyaha 2 jibbaar lacagtii curaarta iyo dulsaar. Sidoo kale, haddii milkiilaha guriga kaa haysto qeyb ka mid ah curaarta "sabab la'aan", waxaa lagugu abaalmarin karaa ilaa $200 oo ah "ganaax soo-daahid." "Sabab la'aan" waxaa loola jeedaa in kireeyuhu lacagtaada u haystay si khalad ah, oo aan sinaba loogu garaabi karin.
Haddii aad heshay qoraal faahfaahin ah oo aadan ku qanacsaneyn sababaha loo haysto curaartaada, waxaad ku dacweyn kartaa kireeyaha in laguu soo celiyo lacagtaadii. Kireeyaha guriga waa in uu cadeeyo in lacagta loo isticmaalay dayactirid. Waxaad geysan kartaa kiisaska noocan ah Maxkamadda Heshiisiinta haddii dacwaddaadu ay tahay $15,000 ama wax ka yar. Waxaa jirta lacag lagu xareeyo markaad bilaabeyso kiiska maxkamadda, laakiin maxkamaddu ayaa kaa dhaafi karta (kuu cudurdaareysa) haddii aadan awoodin. Xoghaynta maxkamadda ka codso waraaqaha lagaaga dhaafayo lacagta.
Si aad naftaada u difaacdo, sameyso liis ah wax kasta oo ka xun guriga inta aadan u guurin ka hor oo kireeyuhuna ha kuu saxiixo. Isu barbar dhig liiskaaga iyo liiska kireeyaha ee markii aad ka soo guurtay guriga. Xusuusnow, waa wax aad muhiim u ah in aad sameyso liiska ka hor intaadan ku guurin iyo ka dib markaad ka guurto. Guji linkiga bogga 64 si aad u aragto heshiis kiro oo tusaale ah.
Eeg bogagga 49 ilaa 50 xuquuqdaada alaabada iyo hantida shakhsiga ah.
Haddii aad ku nooshahay guryaha dowladda, ama kuwa caawiso ku saleysan mashruucyada (sida Section 8 ama dhismaha Section 236 building), ama kireysteyaasha la kaalmeeyo ee Section 8 Voucher, dhammaan difaacyada lagu sharxay buuggan waa ay ku khuseeyaan, sidoo kale. Waxa intaas sii dheer in aad leedahay xuquuqo iyo waajibaad dheeraad ah maxaa yeelay waxaad helaysaa kabid kaa caawisa bixinta kiradaada.
Xuquuqda aad ku leedahay guryaha kabista ah waxay ku xiran tahay barnaamijka aad ku jirto. La xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga si laguu caawiyo (eeg liiska ka bilaabanaya bogga 73). Qaar badan oo ka mid ah diffacyada lagu si daray waxay ku jiraan heshiiska kirada qoran ee barnaamijyada guryaha lagu kabo oo dhan.
Barnaamijyada badankooda mashruucyada ku saleysan ee lagu kabo dhismaha, waxaa lagaa saari karaa keliya haddii kireeyuhu haysto sabab macquul ah oo uu guriga kaaga saaro, mana ahan sabab kasta sida kirada ah bil-bil ee guryaha gaarka loo leeyahay. Dhismeyaasha badankooda mashruuca ku saleysan, kireeyuhu waa in uu sidoo kale bixiyo ogeysiis qoraal ka-saarid ah iyo xaq loogu leeyahay in lala kulmo kireeyaha si loo xalin karo dhibaatada iyadoon guriga laga guurin.
Kireystayaasha haysta Section 8 Voucher, oo ah halkaas oo aad ka qaadato kabista markaad ku guurto, heshiiska waa la burin karaa sabab la'aan marka uu dhammaado ka dib.
Inta badan guryaha dowladda ee la iska saarayo, waxaad xaq u leedahay dacwad-dhageysi rasmi ah oo aad hor tageyso qof ama guddiga ka socda Maamulka Guriyeynta ka hor inta aysan maxkamad guriga kaa saarin.
Dhammaan guryaha dowladda iyo barnaamijyada guryaha la kabo waxay leeyihiin xad dakhli ah oo loo eego codsadeyaasha. Qaar ka mid ah barnaamijyada guriyeynta ayaa sidoo kale ku xadeeya codsadeyaasha sida da' ama nooc naafannimo gaar ah. Maamulka guryaha ee deegaanka ama xafiiska guriyeynta ee HUD ee Minneapolis ayaa ku siin kara macluumaad ku saabsan xadka dakhliga.
Marka lagu daro dakhliga iyo xaq u yeelashada barnaamijka, shuruudo kale ayaa la iska rabaa. Shuruudahaas qaarkood waxaa ka mid ah:
kirada oo lagu bixiyo wakhtigeeda
heshiiska iyo sharciyada oo la raaco
deriskaaga oo aan la dhibinb, iyo
waxyeello inaan loo geysan guriga.
Si loo kala doorto dadka guriga deggaya, kireeyuhu wuxuu eegi karaa
In uu kireeyeyaal kale ka soo hubsado in aad kiradaada bixin jirtay ama haddii aad dhib ku haysay deriskaaga.
In uu taariikhda dambiyo aad soo gashay meel kasta ka soo baarto, booliska, danbi-baarista FBI, iyo/ama maxkamadaha.
In uu soo baarto diiwaankaaga maxkamadda haddii kireyte uu si sharci darro ku deggenaa guri ama xafiisyada baarista kireystaha.
In uu soo baarto sumcaddaada amaahda.
Haddii aad tahay dhibbane ay ku dhacday tacaddiyada qoyska gudihiisa, barnaamijka guriyeynta laguuguma diidi karo iyadoo sababtu tahay xadgudub laguu geystay. Tacaddiyada qoyska gudihiisa waxay noqon kartaa xadgudub lagugu sameeyo adiga ama xubin qoyskaaga ka mid ah, shukaansi rabshad la socoto iyo dabagelid. Wakaaladda guriyeyta ama kireeyaha waxay kaa codsan karaan inaad caddeyso tacaddiyada qoyska gudihiisa.
Waxaad heleysaa go'aan qoran oo kuu sheegaya xuquuqdaada racfaanka.
Waxaad xaq u leedahay inaad ogaato macluumaad kasta oo xun oo ay helaan kireeyaha guriga/maamulka guryaha. Inta badan waxaad xaq u leedahay in aad bixiso macluumaad kale si aad u saxi karto macluuaadka xun ee khaldan. Waxaad sidoo kale muujin kartaa in xaaladdaadu is beddeshay, sida in aad shaqo heshay ama aad talo-bixin ku jirto.
Haddii aad dalbatay guri dowladeed oo ay ay kuu diideen Maamulka Guriyeynta, waxaad xaq u leedahay dacwad-dhageysi. Waxaad xaq u leedahay in aad baarto sababaha loo cuskaday in lagu diido codsigaaga iyo in aad saxdo wixii khalad ah. Dacwad-dhageysiga markuu socdo, gebi ahaan macluumaadka ku jira feylka Maamulka Guriyeynta ayaa la soo bandhigi doonaa.
Dhammaan guryaha dowladda iyo kuwa ay kabto waxaad xaq ugu leedahay "qaabilaad macquul ah". Taas macnaheedu waa in aad weydiisan karto in sharciyada helidda ama waxyaabaha la beddelayo haddii aad u baahan tahay in aad beddesho naafannimo aad qabto awgeed. Codsiga aad rabto in lagu beddelo sharciyada waa in uu noqdaa mid macquul ah oo ku siinaya inaad si sinnaan ah u hesho hoyga
Shuruucda federaalka waxay xadeysaa kirada la kabo iyo guryaha dowladda dadka deggen in ay bixiyaan. Lacagta kirada waxay ku xiran tahay dakhligaaga. Kirada ay dadku ku bixiyaan guryaha dowladdu leedahay iyo kuwa ay kabto waa boqolkiiba 30 dakhligaaga ka dib marka laga jaro waxyaabo go'an, ama kirada ugu yar ee u qoran maamulka guriyeynta. Waa in aad haysato caddeynta dakhligaaga markaad guri codsaneysid waa inaad soo sheegto kororka dakhligaaga mar kasta. Haddii dakhligaagu hoos u dhaco, kiraduna waa ay kaa yaraaneysaa. Xaqiijin ah dakhliga iyo kirada ayaa la sameynayaa sannad kasta hal mar, laakiin waa inaad soo sheegto dakhligaaga iyo isbeddelka qoyska sida ku xusan sharciyada barnaamijka guriyeynta. Kirada oo la isku badiyo waxaa keeni kara difaaca ah dacwad maxkamadeed oo guriga la isaga saarayo. Haddii aad su'aalo ka qabto shuruudaha soo-sheegasho ama difaacidda guriga la iaga saarayo, waa in aad la xiriirto qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee degmada (eeg liiska ka bilaabanaya bogga 73).
Maamulka Guriyeyta waxay leeyihiin habraac ah cabashooyinka oo loogu tala galay dadka deggan guryaha dowladda. Kireeyeyaasha guryaha gaarka loo leeyahay wax waajibaad ah ma saarna. Waxaad laga caban karaa wax kasta oo uu kireeyaha gurigu sameeyo oo aad rumeysan tahay in ay khatar ku yihiin caafimaadkaaga iyo amnigaaga, ama lacagta kirada ah ee aad bixiso. Dhammaan codsiyada dacwad-dhageysiga cabashada waa in ay ahaadaan qoraal. Maamulka guriyeynta sida caadiga ah waa in uu sidoo kale adeegsadaa habka cabashada markay sheeganayaan inaad jabisay heshiiska kirada.
Gobolka Minnesota, Maamulka Guriyeynta ayaa laga yaabaa in ay ka tanaasulaan habka cabashada oo ay si toos ah u aadaan maxkamad si ay guriga kaaga saaraan markay ogaadaan in heshiiskaaga kirada uu khatar ku yahay caafimaadka ama amniga. Haddii laguu diido dacwad-dhageysiga cabashada, gaar ahaan ka hor dacwad-dhageysiga ah ka-saarida guriga, la xiriir xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga ama qof u dooda arrimaha guryaha.
Dacwad-dhageysiga cabashada waxaad ku leedahay 4 xuquuq oo muhiim ah:
Waxaad xaq u leedahay inaad faylkaaga ku aragto xafiiska maamulka guryaha ka hor dacwad-dhageysiga cabashada rasmiga ah, sida dhammaan macluumaadka ay maamulku u adeegsanayaan cabashada.
Waxaad xaq u leedahay inaad "su'aalo weydiiso" (su'aalo adiga kugu saabsan) iyo markhaatiyaasha kaa sameeyey cabashada. Maamulka guriyeynta ma soo bandhigi karo dacwad-dhagaysi ah markhaati la'aan si ay u sheegtaan dacwadooda.
Waxaad xaq u leedahay in lagu matalo qareen ama qof kale oo aad keensato.
Waxaad xaq u leedahay go'aan ku saleysan keliya caddeyn in lagu soo bandhigay dacwad-dhageysiga. Dadka go'aanka gaaraya ma tixgelin karaan wax caddeyn ah oo aan la keenin dacwad-dhageysiga.
Haddii aad ku nooshahay guryaha dowladda ee ah kuwa ku saleysan mashruucyo caawimaad ah, waxa guriyahaas lagaaga saari karo oo keliya waa sababo culus ama jebinta shuruudaha heshiiska kirada oo soo noqnoqda ama sababo kale oo macquul ah awgood.
Tusaaleyaal ah xadgudubka kirada ee daran waxaa ka mid ah
in si bareero ah loo waxyeelleeyo guryaha
in la rabsheeyo kireysteyaasha kale
Haddii aad tahay qof la kulmay tacaddiyo qoys gudihiis, lagaagama saari karo guriga xadgud uu qof kug sameeyey awgiis. Tacaddiyada qoyska gudihiisa waxay noqon kartaa xadgudub lagugu sameeyo adiga ama xubin qoyskaaga ka mid ah, shukaansi rabshad la socoto iyo dabagelid. Tan macnaheedu maaha in wakaalada guryaha ama kireeyuhu aysan dhaqan gelin karin xeerarka kale ee barnaamijka guryaha ama shuruudaha kale ee heshiiska kirada.
Tusaaleyaal ah xadgudubka kirada ah ee yaryar ee aasaaska u noqon kara ka-saarista haddii marar badan la sameeyo waxaa ka mid noqon kara diidmo soo-noqnoqot oo ah kormeeridda ballanteeda ama dayactirkeeda, ama bixinta kirada oo si joogto ah loola soo daaho. Xusuusnow, guri in lagaa saaro marar badan bixinta kirada awgeed waxa looga hortagi karo waa iyada oo si dhakhso ah loo soo sheego hoos u dhaca dakhliga. Warbixintaadu ha noqoto qoraal.
Waa in lagugula socodsiiyo sababta guriga lagaaga saarayo. Intaas waxaa sii dheer, qof ahaan markaad kireysato guryaha dowladda, waa in lagugula socodsiiyo xaqa aad u leedahay inaad codsato dacwad-dhageysi ah cabasho. Nooca ogaysiiska iyo wakhtiga kama-dambeysta ah ee lagu codsanayo rafcaan waxay ku xiran tahay nooca barnaamijka guriyeynta. Haddii aad hesho ogeysiis aad guri uga guureyso waa in aad la hadasho xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga ama qof u dooda guryaha. Xataa haddii lagaaga guuleysto dacwad-dhageysiga cabashada ah ee maamulka guryaha, lagagama saari karo guriga dacwo maxkamadeed iyadoo aysan dhicin iyo dacwad-dhagaysi maxkamadeed. Wakhtigaas ayaad fursad u haysataa in aad is difaacdo. Marka guriga lagaa saarayo (haysashada sharci-darrada ah) dacwad-dhageysiga waxaad sheegan kartaa gebi ahaan difaacyada horay looga soo hadlay ee kireeyaha guryaha caadiga ah/xiriirka kireystaha. Waxaa sidoo kale laguu hayaa kuwa guryaha dowladda, barnaamijyada guryaha ashruuca ah, ama kuwa Section 8 Voucher.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Guryaha Dowladda, raadso buug-yare la yiraahdo Hoggaanka Guryaha Dowladda ee Mineasota (A Guide to Public Housing in Minnesota). Waxaad koobbi ka heli kartaa xafiiska kaalmada sharciga ee deegaankaaga ama intarnetka www.lawhelpmn.org/so.
Sida uu qabo sharciga Minnesota, kireysteyaasha deggan guryaha la dhiso ayagoo diyaarsan waxay leeyihiin xuquuq iyo waajibaad la mid ah kireysteyaasha kale ee deggan guryaha kale. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale jira sharciyo khuseeya xaalado gaar ah oo ku yimaada oo keliya guryaha la dhistoddobaatameeyadii ka dib.
Waxyaabaha hoos ku qoran waa qaar ka mid ah sharciyada gaar ah oo loogu talagalay kiraysteyaasha guryaha la dhiso ayagoo diyaarsan
Kirada waxaa la kordhin karaa laba jeer sanadkiiba.
Kireeyaha guryaha la dhiso ayagoo diyaarsan waa in uu u isticmaalo heshiis qoran kireystaha marka uu meel ka kireynayo. Heshiiska qoran waa inuu sheegaa dhammaan shuruudaha iyo xaaladaha heshiiska. Arrintan waxa ay ka duwan tahay kireysteyaasha guryaha caadiga ah maxaa yeelay qaar ka mid ah kireeyeyaasha dhismayaashaas ayaa ku tiirsan heshiis afka ah oo ah kii kirada
Kireeyaha dhulka waa in uu bixiyo ogeysiis qoran oo uu siiyo 60 maalmood ka hor kireyste intaan la beddelin wax sharci ah. Xeerar cusub ayaa laga yaabaa in lagu dhaqangaliyo kiraysteyaasha hadda keliya haddii ay xeerarka cusub yihiin kuwa macquul ah oo aan wax weyn ka beddeleyn heshiiskii asalka ahaa ee u dhaxeeyey kireystaha iyo kireeyaha baarkinka. Dhismeyaasha kale ee kirada ah, ogeysiiska loo baahan yahay in la beddelo xeerka wuxuu ku xiran yahay nooca kirada (sida mid caadi ah ama mid xilli go'an).
Kireysteyaasha guryaha warshad lagu soo diyaarshay waxa ay xaq u leeyihiin inay "abaabulaan" oo qabsadaan shirar ku saabsan arrimaha saameynaya kiraysteyaasha. Kireeyaha booska ma mamnuuci karo kuwaas ama wax kasta oo ay kireystuhu ugu hawlan yahay dan u gaar ah guriga. Si kastaba ha ahaatee, kireeyaha booska ayaa laga yaabaa in uu raaco sharciyada waqtiga, goobta, iyo qaabka hawshu u socoto.
Wixii macluumaad intaas ka sii badan oo ku saabsan sharciyada gaarka ah ee saameynaya kireysiga haddii aad ku nooshahay seeraha guryaha laga dul dhisto dhul kiro ah, kala xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee degmada ama ka eego www.LawHelpMN.org wixii macluumaad dheeraad ah.
7525 Mitchell Road, Suite 310
10125 Crosstown Circle, Suite 100
Rental History Reports, Inc.
10505 Wayzata Blvd., Suite 200
910 Ivy Avenue
By the Residential Real Estate Committee, Real Property Law Section
Waxaa soo saaray Guddiga Guryaha Beeciya, Qeybta Sharciga Hantida Guryaha
Ururka Shahaadada Imtixaanka Qareenka
Waxaa soo saaray Guddiga Guryaha Beeciya ee Golaha Sharciga Hantida Ma-guurtada ah ee Ururka Shahaadada Imtixaanka Qareenka Minnesota ayaa soo saaray heshiiska kireysiga oo cusub oo loogu talagalay guud ahaan kireysteyaasha iyo kireeyeyaasha guryaha. Foomka magaciisu waa, "Heshiiska Caadiga ah ee Kirada Minnesota."
Foomkan kirada cusub wuxuu waafaqsan yahay Xeerarka Minnesota ee lagu ansixiyay kalfadhi sharci-dejin ahaa ee sannadkii 2000. Foomka waxaa dibu-eegis kusameeyey Xeer-ilaaliyaha Guud ee Minnesota oo wuxuu ka kooban yahay qoraalka soo socda:
"The Office of the Minnesota Attorney General certifies that this contract complies with the requirements of Minn. Stat. І325G.31 (1999). Certification of a contract by the Minnesota attorney general under the plain language contract act is not otherwise an approval of the contract's legality or legal effect."
"Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee Minnesota wuxuu caddeynayaa in qandaraaskan waafaqsan yahay shuruudaha sharciga Minn. Stat. І325G.31 (1999). Caddeynta qandaraaska ee xeer-ilaaliyaha guud ee Minnesota ee hoos imanaya sharciga qandaraaska luqadda fudud maahan sida kale ogolaansho sharci ahaaneed oo ah qandaraas ama saamaynta sharciga."
Si aad ula soo degto koobbi TUSAALE ah oo ah Heshiiska Kirada Caadiga ah ee Minnesota, waa inaad uga soo codsato si lacag la'aan (bilaash) ah bogga intarnetka ee Ururka Shahaadada Imtixaanka Qareenka (afka Ingiriiska oo keliya ayaa lagu heli karaa): http://www.mnbar.org/members/committees-sections/msba-sections/real-property-law-section/residential-real-estate-committee-forms#.WbrJ-CSVc98
Cutubka 2. Kireysashada Guri »